Safety Cards - Turvakortit - Somali by Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Issuu
Kaararka badbaadada waxaa soo saaray Ururka Gurmadka Qaran ee Finland (SPEK) o kaashanaaya Machadka Badqabka iyo Amaanka Iskudhafan ee Kooxaha Gaarka ah. (OTE) iyo Mashaariicda skudhafka Badbaadada iyo Amaanka Dadka soo Galootiga ah (OTE-M). Kooxaha diirada lagu saaraayo kaararka waa kooxo gaar ah, dadka soo galootiga ah iyo qoysaskooda, NGO yada, faya dhawrka bulshada iyo waaxda daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale adeegyada gurmadka degdega ah iyo ardayda. Si taas lamid ah, kaararku waxay ku haboon yihiin qof kasta oo xiisaynaaya badbaadada iyo amaanka. Ujeedada adeegga ayaa ah in xog aasaasi ah laga helo qalabka tignoolooiyada amaanka maalin kasta iyo alaabaha kale iyo farsamooyinka kor u qaadaaya amaanka. Kaararka amaanku waxay ka kooban yihiin 50 kaar. Baakadu waxay ka kooban tahay shan kaararka shactirada ah, 44 kaararka jilista ah iyo kaarka kaafarka ah. Kaararka shactiradu waxay baxshaan xog aad u qaali ah oo dhanka badbaadada iyo amaanka ah oo la xariirta xiisadaha, xaquuqda qof kasta, dhaqdhaaqaaqa, iyo saamayta qaab nololeedka iyo ururada badqabka bulshadu ku leeyihiin badbaadada aalin kasta.
Kaarar waxaa loo qaybshaa afar mawduuc
Mawduucyada kaararka Waxaa jiro 11 kaar oo loo sameeyo mawduuc kasta. Kaararku waxay qqimeeyaan sababta, goobta iyo qaabka loo adeegso shay ama qaabkeeda shaqada. Waxaa jiro tilmaamo uhiim ah iyo xog dheeri ah oo la xariirta kaararka, sidoo kale. Kaararku waxay sidoo kale xog ka baxshaan qarashka hooseeya ee la qiyaasay (heerka qiimaha 2019) ee madeecooyinka iyo meelaha lagasoo iibsan karo. Qiimayaasha ayaa ah qiyaasaad maadaama qiimaha kama danbaysta ah ay saamayn ku yeelanayaan naqshada shayga, qaabka shayga, tayada iyo shayga yo goobta laga iibsanaayo. Magacyada guud ayaa loo adeegsadaa goobaha laga iibsado halka dhammaan badeecooyinka sidoo kale laga heli karo dukaanada oonleenka ah.
Tafaariiqda Baakada kaararka iyo sidoo kale qaar kamid ah alaabta waxaa sidoo kale laga heli karaa dukaanka oonleenka ah ee SPEK: http://verkkokauppa.spek.fi/. Kaarar ayaa lagu heli karaa ayadoo nuqul waraaq ah iyo ayagoo elektarooniga ah labadaba. Marka lagu daro xogta oo ku qoran luuqada Finishka, kaararka badbaadada waxaa lagu heli karaa toban luuqadood oo kale. Noocyada ku qoran luuqadaha kala duwan oo oonleen ah ayaad ka helaysaa bartawww.spek.fi/OTE iyo www. spek.fi/OTE-M laga bilaabo biloowga sanadka 2020. Xogta ayaa si bilaash ah loo soo dagsan karaa si loo adeegsado arimo ka baxsan ganacsiga marka la sheegaayo goobta lagasoo qaatay. Kaararka waxaa lagusoo daabacay taageerada Xarun Maal galinta Faya dhawrka iyo Ururada Caafimaadka (STEA). Daabacaadii koobaad ee kaararka waxaa lasoo daayay Nufeembar 2019.
© Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Qaab nololeedka Aalada sunta ah, tubaakada iyo daawooyinka
Qaab nololeedka - aalada sunta ah, tubaakada iyo daawooyinka
Khamrada Khamiriga ayaa badanaa loo adeegsadaa xafladaha dadka qaarna waxay u adeegsadaan inay ku marqaamaan. Cabista xad dhaafka ah ee khamrigu waxay kordhisaa khatarta cudurada iyo shilalka, waxay sababtaa dhibatooyin bulsho waxayna yarayn kartaa mudada qofku noolaan karo. Khamriga ayaa doorar waawayn kuleh dad badan oo qaraqmay, shilalka wadooyinka, iyo bariiqashada iyo dhicitaanka. Adeegsiga khamrigu waxay khatar galisaa badbaadada marka ay jirto cimilo qaboow iyo markay jirto cimilo kulul labadaba. Haddii aad khamri cabto, gaari ha wadin. Khamriga waa laga mamnuucay goobta saqada iyo wadooyinka. Khamriga waa inaan lala cunin daawada.
Tubaakada Tubaakadu waa sharci gudaha Finland. Carruurta ka yar 18 sano jir looma ogola inay iibsadaan ama haystaan tubaako, tubaakadana waa inaan laga iibin ama lasiin ilmo carruur ah. Sigaarku wuxuu abuuraa khataro waawayn oo dhanka caafimaadka ah. Wuxuu kordhiyaa khatarta qaadista kansarka. Sigaarka tubaakadu sidoo kale waa mid caafimaad daro abuura. Sigaarka waa ka mamnuuc in lagu cabo goobaha dadwaynaha. Sigaarka ayaa kor u qaada khatarta dabka. Khatarta ayaa sii kororta marka sigaarka lagu daro isticmaalka maandooriyaasha. Markaad sigaar cabayso, xaqiiji inaysan agtaada oolin alaabaha gubtaa. Haashka sigaarka waa in lagu shubaa seesar aan gubanin ama qasac. Inaad si taxadar la'aan ah sigaar ugu cabto banaanka ayaa kordhinaysa halista ah in dab qabsado kaynta.
Daawooyinka Daawooyinka waxaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo xanuunnada. Khamriga iyo maadooyinka kale ee sunta ah waa inaan lala cunin daawada, haddii kale daawadu uma shaqayn doonto sidii loogu tala galay waxayna keeni kartaa dhibaatooyin. Daawada waa in loo isticmaalo sidii uu kuugu qoray dhakhtarkaaga. Daawooyinka waa in lagasoo iibsadaa farmashiyaasha. Daawada loo qoray qof kale waa inaan marna la isticmaalin.
Maxaan dareen u siinayaa arintaan? Bariiqashada iyo dhicitaanka ayaa sababa inta badan shilalka dhimashada ah gudaha Finland. Xataa ku socoshada aaga wadada ayaa khatar galin karta badbaadada maalin kasta. Badbaadada dhaqdhaqaaqa wa ain sidaas awgeed la siiyaa feejignaan gaar ah, gudaha iyo banaanka guriga labadaba.
Sidee ayaan ku xaqiijinayaa? Badbaadada dhaqdhaqaaqu waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo dhawr ah. Marka xaqiiji in gurigagu leeyahay marino aan la xanibin iyo layrarka meelaha guud. Haddii ay muhiim tahay, adeegso qalabka dhaqdhaqaaqa taageera. Xaqiiji dhaqdhaqaaqa oon la xanibin. Waxba ha dhigin marinada iyo albaabada. Yaree xajmiga waxyaabaha aan muhiimka ahayn (xadiga dabka) gudaha guriga iyo jarajarada labadaba. Xaqiiji in meel kasta oo hoos ujeeda iyo jaranjarooyinka ay leeyihiin gacanada la cuskado oo adag. Xaqiiji in fagaaga iyo marinada lagu socdo lagu shubo ciid si marka ay jiraan xaalado sidbasho. Xaqiiji in layrar fiican ku xiran yihiin gudaha iyo banaanka guriga. Waxaad layrarka kor ugu qaadi kartaa baraha iftiinka iyo xakabado kali-kali ah. Layrka banaanka, ee dheeraadka ah ayaa ka yimaada falaashyada layrka iyo laanbadaha madaxa ee kala duwan. sidoo kale xasuusnoow jir dhiska muruqa iyo dhisnaanta cinjirka, badbaadada marka aad marayso meelaha banaanka, kabo ku haboon cagta ee xaaladaha jira iyo cimilada. Ka faa''iidayso aaladaha casriga ee goobaha sheega haddii aad dhunto. Araga iyo maqalka ayaa sidoo kale taageerada dhaqdhaqaaq amaan ah. Xidho ookiyaalo iyo qalabka kaalmaatiga maqalka hadday muhiim tahay. Qalabka fududeeya maqalka hadalka ayaa sidoo kale ku haboon badbaadada dhaqdhaqaaqa ka hor intaadan soo iibsan qalabka shaqsiga ah ee taageera maqalka.
Dhaqdhaqaaqa iyo wadooyinka Marka aad ku safrayso adada, waa inaad doorataa waqti iyo wado amaan ah. Haddii aad dhibaato ku qabto gaari wadista, ka fakar inaad cid kale u dhiibato gaariga. Badbaadada dhaqdhaqaaqa ayaa sidoo kale u baahan inaad ka fiirsato markaad baaskiil wadayso ama soconayso. Xasuusnoow xeerarka wadada, in lagu arko aadna wax aragto labadaba.
alabka kaalmaatigu wuxuu ku siinayaa badbaado Jimicsigu wuxuu muhiim u yahay ilalainta xooga murqaha wuxuuna sidoo kale keenaa farxada nolosha maalin kasta. Sidaas awgeed, jimicsigu waa mid qiimo badan, xataa haddii uu yahay mid dhib badan. Adoo kaa shanaaya qalabka sixitanaka, waxaad sii wadi kartaa inaad hasha sii wadato inkastoo dadaalkaagu hoos u dhacaayo. Inaad qof kale kaxaysato ayaa sidoo kale kaa caawinaaya inaad si badbaado leh u samayso jimicsi! ÂŠ Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Xaquuqda qof kasta ELÄMÄNTAVAT
Xaquuqaha qof kasta
Wadanka Finland xaquuqaha qof kasta waa muhiim: waxaad kusoo wareegi kartaa aadna kusoo baashaali kartaa dabiicada qaabab badan. Xaquuqaha qof kasta waxaa leh qof kasta oo ku nool joogana wadanka Finland. Uma baahnid inaad cid fasax ka qaadato. Fadlan xasuusnoow in hal ku dhiga xaquuqaha qof kasta aysan qusayn aagaga lagu xanaaneeyo dabiicada, sida jardiinooyinka qaranka. Markaad booqanayso meelaha noocaas ah, markasta hubi xeerarka goobta xili hore. Xeerarkooda ayaa ka sareeya xaquuqaha qof kasta.
Waxaa la ii ogolyahay •	•	•	•	•
Inaan socdo, kabaha kusoo wareego baaskiil wado si xor ah. Hase yeeshee, kuma socon karo qof fagaaggiisa ama meel uu beer ka fasho ama goobta beerashada Inaan si ku meel gaar ah udago aana habayn ugu hoydo meelaha dhaqdhaqaaqa haddii kale la ogolyahay Inaan gurto miraha kaynta, cadeey doonbirta iyo geedaha aan difaaca lahayn Aan dabto aana ka kaluumaysto barafka (xasuusnoow ruqsada kaluumaysiga) Inaan ku socdo kanaalada biyaha iyo barafka..
La iima ogola •	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inaan dhibo ama waxyeelo u gaysto dadka kale, dabiicada ama bii'ada Inaan dhibaateeyo buulalka shinbiraha iyo aana ku ciyaaro xayawaanka Inaan soo rido ama dhibaato u gaysto geedaha taagan Inaan qaato ubaxyada, caar-caarada, ciida ama xaabada Aan dhibaateeyo arimaha sirta ah ee goobta Aan qashin ku daadsho Aan gaariyaasha matoorka ku shaqeya ku wado meel ka baxsan wadada anoon fasax ka qaadan mulkiilaha dhulka. Inaan ka kaluumaysto aana ugaarsado anoon wadan ruqsadaha loo baahan yahay Inaan shido dab furan anoon fasax ka qaadan mulkiilaha dhulka Inaan shido dab furan inta lagu jiro digniinaha dabka ee kaymaha
Shabaqa dadban ee badbaadada bulshada
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Shabaqa dadban ee badbaadada bulshadu wuxuu taageeraa nolol maalmeedkaaga iyo noolaanshaha. Wuxuu kordhiyaa badbaadada dadka wuxuuna kordhiyaa dareenka amaanka.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Waxaad dalban kartaa caafimaad ama dadka aad jeceshahay ayaa caawimaad ku siin kara xaalad kasta oo xirfadahaaga ama ilahaagu yihiin kuwo aan kugu filnayn. Shabakada badbaadada ayaa diyaar kuu noqonaysa markaad u baahato taageero jireed, dhimir ama mid bulshanimo. Baahida taageerada ayaa imaan karta marka dhibaatooyin nololeed jiraan iyo sidoo kale xaaladaha naxdinta leh.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Firfircooni lahoow oo diyaarso shabakadaada gaarka ah ee badbaadada oo ka kooban dadka kuu dhawdhaw, qaraabadaada, saaxiibada ama dadka aad isku barataan shaqada ama hawlaha nolosha. Isku waafaqa eheladaada inaad magacooda ku darto shabakadaada badbaadada. Kuqor dadka ugu muhiimsan e ku jira shabakada badbaadada foom kuna qor foomka meel aan arki karto. Markaad u baahato caawimaad, waxaad ka fiirin kartaa qofka ku haboon foomka shabakada badbaadada kadibna waad la xariiri kartaa. U sharax dhibaatada ku haysata kana cdoso caawimaad.
Maxaan u baahanahay inaan ogaado? Wadanka Findland, in kabadan hal milyan oo dad ah ayaa caawiya dadka ehelkooda ah. Mararka qaar, dadka ayaa leh shabakadaha badbaadada oo dabiici ah iyo kuwo aad u adag. Shabakadaha badbaadada ee dadka kale ayaa noqon karta mid aad u kooban. Markaan dhanka kale u dhigno, inaad lahaato xataa hal qof oo taageero ku siiyo waa wax fiican. Taas badalkeed, shabakada badbaadadu waxay ka koobnaan kartaa kaliya saraakiisha shaqadoodu tahay inay taageeraan qofka u baahan.
Noocayga shabakadayda badbaadada bulshada waxaad laga heli karaa www.spek.fi/ote
Waxaa jiro sadex nooc oo kala duwan oo shabakadaha badbaadada bulshada ah, dooro nooca adigga kugu haboon. Foomka waxaad ku qori kartaa magacyada iyo nambarada taleefanka xirfadlayaasha bixiya taageerada maalin kasta, shaqaalaha daryeelka guriga, sifeeyaasha tuubada qiiqa iyo sidoo kale xogta lagala xariiraayo dadka masuulka ka ah dhismaha. Inaad xogta qoroto waxay boobsiinaysaa ayna fududaynaysaa inaad raadiso, aadna hesho caawimaad marka xaalad degdeg ah jirto. © Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Jiilaalka Xiliga jiilaalka ee Finland waa mid dheer cimiladuna way kala duwan tahay qaybaha kala duwan ee wadanka Finland. Heer kulada jiilaalka ayaa u dhaxeeya heerarka eber ilaa kuwa si xun u qaboow. Heerka qaboowga ayaa kasii hoos mari kara 30 digrii. Jiilaalka ayaa kordhiya dabaysha qaboow. Sabab la xariirta cimilada aadka u qaboow waa muhiim inaad dhar dugsi leh xirato. Waa muhiim inaad xirato lakabyo dhar ah. Haddii aadan qabin dhar kugu filan ood xirato, waxaad qaadi kartaa dhiiga oo ku fariista ama dhiiga oo socon waaya. Gu'ga Xilliga gu'ga, barafka ayaa dhalaala, heerarka biyaha ee wabiyada ayaa kordha, barafka ayaa bilaaba inuu dhaqaaqo. Barafka dhalaala ayaa sababa daadad. Wadooyinka ayaa sidoo kale la xiri karaa sabab la xariirta daadadka. Waxaa qasab ah inaadan ku socon barafka xilliga gu'ga. Inkastoo barafku noqon karo mid culus, haddana wa amid daciif ah oon xajin karin qofka dushiisa ku socda. Xilliga gu'ga, dab ha ku shidan banaanka haddii ay jirto halis ah in kaynta dab qabsado. Sidoo kale waxaa mamnuuc ah inaad banaanka ku gubto qashinka guriga. Khatar ka dhalan karta dabka kaynta ayaa sidoo kale sii socon karta ilaa xagaaga iyo dayrta. Xagaayada xilliga xagaaga, waxaan ku raaxaysanaa cimilada iftiinka iyo heer kulka diiran leh. Hase yeeshee, mararka qaar aad ayay u kululaan kartaa Markay sidaan dhacdo, xasuusnoow inaad biyo badan cabto aadna naftaada ka ilaaliso qoraxda badan. Kuleelka mudada dheer wuxuu kiciyaa jirka, arka iskuday inaad gurigaaga qaboojiso. Xilliga xagaaga, dadku waxay ku dabaashaan badda iyo harooyinka. hase yeeshe, heerkulka biyaha ayaa noqon kara mid qaboow. Baro dabaasha. Haddii aadan dabaalan karin, adeegso jaakado fudud. Haku dhaafin ilmahaaga xeebta asagoon cidna la joogin xataa daqiiqad. Dayrta Daba yaaqada xagaaga iyo dayrtu waa mugdi. Markaad marayso banaannada, xaqiiji inaad qaadato toosh. Ayadoo heerkulku sii qaboobaayo, wadooyinka ayaa noqon kara kuwo lagu sidbado. Xilliga dayrta, waa inaad xirataa dhar ku haboon oo diiran. Dayrtu waa waqti ku fiican inaad gurashada maashruumka. Haddii aad guranayso maashruumka, baro sida loo aqoonsado kuwa la cuni karo ood uga soocdo kuwa sunta ah. Xasuusnoow xaquuqaha qof kasta. Xilliiga dayrta, marka heerkuladu hoos u dhacaan, baraf ayaa ku samaysmi kara wadooyinka wada ayaana noqon karta mid sidib ah. Waa inaad gaariga ku xirtaa taayirada jiilaalka si aad gaariga uwado si amaan ah. Si taxadar leh gaariga u wad. ÂŠ Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Badbaadada Guriga Liiska
Liiska Badbaadada Guriga
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? U adeegso Liiska Hubinta Badbaadada guriga si aad u hubiso oo aad system ahaan u saxdo khataraha dhanka amaanka ee gurigaaga ama guriga ehelkaaga.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Gurigaaga ama guriga qf aad jeceshahay.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Hel liiska hubinta kadibna dulmar wax kasta oo ku jira liiska. Haddii shayga aad hubinayso yahay mid bad qaba, tig saar bokiska cagaaran. Haddii cilad jirto, tig saar bokiska casaanka ah. Kadibna qor talaabooyinka muhiimka ah ee lagu saxaayo ciladaha jira. Qiimayn ku samee haddii aad sixi karto cilada ama aad isbadalo samayn karto adiggu ama aad u baahan tahay caawimaad. Qor cidda saxaysa cilada iyo goorta. Sidoo kale, in talaabada sixitaanka la fuliyo.
Waa intee qiimaheedu? Qaybta la daabici karo waa lacag la'aan. Markaad webseetka ku samaynayso waa wax ka yar â&#x201A;Ź 1/koobigiiga: www.spek.fi/ote
Xagee ayaan kasoo iibsan karaa? Waxaad kala soo bixi kartaa webseetka SPEAK ama kaydka webka. Ogoow waxaa jiro liisaska hubinta oo kala duwan oo kan la mid ah. Tusaale ahaan, adeegyada gurmadka ayaa qaybiya liisaska hubinta oo kala duwan gudaha gobalkooda. WAxaa intaa sii dheer, noocyada kala duwan ee liisaska ayaa laga heli karaa webseetka.
Arin muhiim ah inaad ogaato Waqti fiican gali markaad akhrinayso liiska hubinta. Waa fikir fiican inaad kala hadasho arimaha dhanka badbaadada iyo xaalada ay marayaan dhammaan qoyska. waa muhiim in qof kasta ogyahay dhibaatooyinka dhanka badbbaadada ee ka imaan kara iyo baahida loo qabo talaabo sixitaan ah. Niyaku hay inaan liiska hubintu badalayn noocyo kasta oo hubinta guriga ah oo ay sameeyaan adeegyada gurmadka ama kormeerka dabka. Ogoow in xaalada qofka guriga dagan ama xaalada nololeed in ay is badali karto. Marka ay jiraan isbadalo muuqda, liiska hubinta waa in dib u eegis lagu sameeyaa waxba laga badalaa.
ÂŠ Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? 112 Suomi waa app aad soo dagsan karto oo aad ku shuban karto taleefankaaga. Markaad isticmaalayso, waxaad helaysaa caawimaad degdeg ah oo lagaa siiyo xaalad degdeg ah. Xogta goobta qofka wicitaanka soo diraaya ayaa si toos ah loogu gudbinayaa Xarunta Gurmadka Degdega ah. Qabashada wicitaanka gurmadka degdega ah ayaa ka boobsiis badan kuwa kale gurmad ayaana loosoo diri karaa goobta saxda ah.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Markay xaalad degdeg ah jirto, markaan u baahanahay caawimaad naftaydu ama aan u rabo qof kale.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Kasoo dagso appka 112 Suomi kaydka appabka ee taleefankaaga. Raac tilmaamaha ku qoran kaydadka appka soona dagso appka. Saar appka meel aad si fudud u arki karto oo ka mid ah shaashada taleefankaaga U fur appka si uu u galo goobta taleefankaaga. Kici appka oo gali nambarka taleefankaaga. Applicationku intaas kadib wuxuu udiyaarsanyahay inaad isticmaasho. Markay xaalad degdeg ah jirto, dooro 112 Suomi application oo ku jira taleefankaaga kadibna riix batoonka WAC 112 kadibna badhanka sameecada. Sheeg magacaaga oo sharaxaad ka bixi xaalada aad rabto in lagaa caawiyo. Ha damin taleefanka ilaa hawgaliyaha Xarunta Gurmadka Xaalada degdega ah uu kuu sheego inaad damin karto.
Waa intee qiimahiisu?
Waa lacag la'aan. Waxaad wici kartaa nambarka xaalada degdega ah xataa haddii aan wax lacag ah kuugu jirin simikaarka taleefankaaga.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? 112 Suomi waxaad kasoo dagsan kartaa kaydadka applicationka ood si lacag la'aan ah ugu shuban karto taleefankaaga.
Arin muhiim ah inaad ogaato Adeegyada dheeriga ah ee 112 Suomi application waxaa ku jira nambarada xaaladaha degdega ah ama caawimaada gurmadka aan degdega ahayn iyo digniinaha gudbinta xaalada degdega ah. Si joogto ah wax uga badal aalada. Waxaad badali kartaa luuqada uu appku adeegsado iyo nambarka taleefankaaga adoo galaaya qaybta settings ka ee aalada. Aalada meelaynta ee GPS waa inaad u furtaa taleefankaaga haddii aad rabto in xogta ugu saxan loo gudbiyo Xarunta Gurmadka Degdega ah. ÂŠ Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Kiimikooyinka maalin kasta ayaa la isticmaalaa. Adeegsigoodu wuxuu fududeeyaa nolol maalmeedka.
Xagee ayaan u adeegsanayaa?
Kiimikooyinka waxaa loo adeegsadaa nadaafada, dhar dhaqaalka iyo dhaqista maacuunta iyo sido kale nadaafada shaqsiga ah. Kiimikooyinka waxaa loogu adeegsadaa shidaal ahaan iyo dufan ahaan gaariyaasha iyo mashiinada. Daawada beeraha, daawada ubaxa kobcisa, sunta cayayaanka, sunta jiirka iyo shidaalka lagu daaro dhuxusha iyo sidoo kale xaabada la shito, ayaa dhammaantood ah maadooyin khatar ah. Kiimikooyinka aan muhiimka ahayn waa wasaq khatar ah. Si fiican meel qashin ugu shub.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Maadooyinku waxay leeyihiin buug sharaxaaya sida loo adeegsado. Raac buugga. Ogoow calaamadaha digniinta:
khatar ku ah caafimaadka
bii' ahaan ah khatar
Gaaska ku jira cadaadiska
dabku qabsan karo
khatar caafimaad/ khatar ku ah lakabka hawada
Ku xaree kiimikooyinka baakadii lagu keenay. Ka dheeroow in kiimikooyinku kaa gaaraan afka, maqaara, indhaha ama sanbabada. Markasta ka fogee kiimikooyinka carruurta iyo xayawaanada rabaayada ah. Gasho qalabka difaaca (galoofisyada iyo ookiyaalaha) iyo, haddii loo baahdo, difaac neefsigaaga oo sifee aaga.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa?
Kaydadka alaabta guriga, suuqyada waa wayn, kaydadka webseetka. Markasta iibso kiimikooyinka shirkadaha magaca leh soo saaraan.
Arin muhiim ah inaad ogaato Kiimikooyinku waxay khatar ku noqon karaan caafimaadka banii'aadamka iyo bii'ada. Kiimikooyinka khatarta ku ah caafimaadka waxay, tusaale ahaan, keeni karaa cuncunka indhaha ama maqaarka, saaqmid ama sumoobid, ama waxay abuuri karaan dhibaatooyin muddo dheer. Niyada ku hay saamaynta dhanka bii'ada ee ka dhalan karta adeegsiga iyo daadinta kiimikooyinka. Markasta ku daadi meel ku haboon kiimikooyinka aan muhimka ahayn. Hadday jirto xaalad degdeg ah oo dhanka kiimikada ah, wac 112. ÂŠ Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Ilaalinta badqabka xogtadaada waxay kaa caawinaysaa inaad ka hortagto ku xad gudubka arimahaaga sirta ah iyo in laguu gaysto xad gudub dhaqaalle. Waxay sidoo kale kordhisaa dareenka badqabka. Calaamadeeyaha digniintu wuxuu kaa caawinayaa inaad xasuusato inaan booliiska ama bangigu marna ku waydiisan doonin inaad siiso koodhadhka aad bangiga oonleen ah ku gasho ama nambarada BIINka taleefanka, wada ama albaabkaaga ku qoran. Hase yeeshee, haddii lagu khiyaano, nambarka degdega ah ee bangigaaga iyo nambarka xaaladaha degdega ah ee 112 ayaa boobsiinaaya soo gudbinta danbiyada laga yaabo inay jiraan.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Ilaali amaankaaga dhammaan hawl maalmeedyadaada nolosha. Adeegso calaamadeeyaasha markaad guriga joogto iyo guriga dadka aad jeceshahay.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Qof kale ha siin koodhadhka bangiga ee oonleenka ah, baasweerka iimeelka ama sir kasta oo lagu galo wax oonleen ah. Ku qor nambarka taleefanka ee bangigaaga foomka calaamadiyaha ah, kaasoo aad wargalin karto, marka ay jirto xaalad degdeg ah, tuugada xogta bangiga ama wax kale oo la mid ah. Saar calaamadihiyaha meel aad arki karto oo guriga ka mid ah. Calaamadeeyuhu wuxuu ku xasuusinayaa inaadan marna siin qof koodhadhkaaga bangiga ee oonleenka. Sidoo kale, cidna ha siin BIIN kaaga nambarka kaarka bangiga. Hase yeeshee, haddii aad si khalad ah u siiso qof xogtaada, si degdeg ah u wac bangigaaga oo soo sheeg xaalada jirta. Bangigaaga ayaa difaacaaya koontadaada. Sido kale u sheeg danbiga interneetka booliiska.
Waa intee qiimihiisu? Waa bilaash.
Xagee ayaan ka iibsan karaa? Waxaa qaybiya waaxda booliiska iyo ururo dhawr ah oo iskaashi la leh. Calaamadeeyaashu waxay ku qoran yihiin luuqadaha Finishka, Swedhishka iyo Ingiriiska.
Arin muhiim ah inaad ogaato Baro xirfadaha interneetka oo si joogto ah ula soco. Si joogto ah u cusboonaysii software=rada kumbuyuutarkaaga iyo taleefanka. Adeegso software ka hortaga fayriska. Ilaalso baasweerada iimeelka iyo adeegyada kale ee korontada ku shaqeeya. Feejignaan lahoow markaad furayso lifaaqyada ku jira iimeelka. Maahan dhammaan waxyaabaha wanaagsan ee iimeeladu balan qaadaan kuo run ah! Cidna ha u sheegin sirta aad ku gasho bangigaaga oonleenka ah ama BIINka kaarkaaga bangiga, ayna ku jiraan dadka ehelkaaga. Qarso baasweerada aad ku gasho bangiga. ÂŠ Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Aaladaha lasocoshada ee shaqsiga ah
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Aaladaha lasocoshada ee shaqsiga ah waxaa loo adeegsadaa in kor loogu qaado amaanka shaqsiga ah. Qofka waxaa lagu ogaan karaa goobta uu joogo aalado kala duwan, ayna ku jiraan taleefanada casriga ah, saacadaha casriga ah, ama aalada gaar ah oo wax lagula socdo.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Aaladaha wax taraag gareeya waxaa lagu adeegsan karaa banaanka guriga ama haddii qof dhumo (carruurta iyo dadka dhimirka ka jiran). Aalada lasocoshada goobta waxaa loo adeegsadaa in la helo goobta qofka caawimaada u baahan joogo. Waxay ku haboon tahay in la dhigo banaanada guryaha. Aalada goobta sheega qaarkood ayaa sidoo kale sheegi kara goobta qofka (aalad) ku jira gudaha guri. Aalada goob raadinta qaarkood ayaa sidoo kale leh ganbaleelada kaliga ah ama xariirka taleefanka.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Haddii aad adeegsato aalada la socoshada goobta ee gaar ah, waa inaad ku xariirisaa taleefanka. Soo dagso aalada la socoshada goobta kuna shubo taleefankaaga. Ku xir aalada taleefanka. Xogta goobta ayaa intaas kadib la hubin karaa haddii loo baahdo. Xasuusnoow inaad jaaj garayso aaladahaaga si joogto ah. Taleefanka gacanta oo leh aaladaha la socoshada goobta ayaa loo adeegsan karaa la socoshada goobta. Markaad aaladahaan adeegsato waxaad u baahan tahay taleefan labaad.
Waa intee qiimaheedu? Aaladaha lasocoshada goobta ee gaarka ah waxaa qiimahoodu ka biloowdaa € 90 + oo lagu daray qarashka adeegga la socoshada ee la adeegsaday ayadoo ku xiran hadba sidaas u adeegsato (qiimaha qarashka interneetku waa ku dhawaad € 50/sanadkiiba).
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Kaydadka webka, kaydadka alaabta guriga, kaydadka taleefanka.
Arin muhiim ah inaad ogaato Haddii uu damo batariga aalada la socoshada goobtu, waxba kuma taraag garayn kartid. Hase yeeshee, xataa haddii aaladu dansan tahay aalada la socoshada goobta ayaa muujin karta goobtii ugu danbaysay ee aalada lagu damiyay. Alada qaarkood ma galaan biyuhu. Aalada waxaa loogu tala galay heerkul ka biloowda -10 - +40 °C. Heerkulada qaboow waxay yareeyaan nolosha batariga. Dhigista ilayska qoraxda ayaa saamayn karta shaqada aalada.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Duleelku wuxuu kordhiyaa amaanka dareenka nabadgalyo ee qofka guriga dagan. Waxay kaa caawin kartaa ka hortaga khiyaanada iyo danbiga. Duleelku wuxuu kuu sahlayaa inaad aragto qofka taagan albaabka iyo inaad go'aansato inaad qofka albaabka ka furto iyo in kale.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Albaabada hore.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Duleelka waxaa lagu sameeyaa albaabka si waafaqsan si waafaqsan tilmaamaha rakibaada. Ku rakib joog ku filan. Duleelka xagasha balaaran leh ayaa kuu sahlaaya inaad aragto aaga ku xeeran albaabka hore.
Waa intee qiimaheedu? Duleel farsamaysan wuxuu ka biloowdaa € 10, midka casriga ah ee albaabka lagu xirana wuxuu ka biloowdaa € 40.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? dukaanada alaabta guriga, dukaanada qalabka dhismaha, dukaanada qufulada, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Marka laga reebo duleelada albaabka ee farsamaysan, waxaa jiro duleelada albaabka oo elektaroonig ah oo laga helo suuqa. Aaladaha ugu fudud waxay noqon karaan kuwa beytariga ku shaqeeya. Batariyaal kayd ah waa inaad haysataa. Duleelka elektarooniga ah ayaa lagu badali karaa godka duleelka farsamaysan. Rakibida aaladaadu waa mid aad u fudud, laakiin caawimaad codso haddii aad u baahato. Duleelka elektarooniga ah wuxuu fududeeyaa aqoonsiga qofka albaabka taagan waxaa mahadleh shaashadeeda wayn.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Marka lagu daro hawada, cuntada iyo dabka, biyuhu waxay lagama maarmaan u yihiin nolosha. Biyo nadiif ah waa in markasta la helaa.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Hayso biyaha oo markasta meel ku shubo. Waxaa fiican inaad biyaha meel ku kaydsato haddii ay dhacdo cilada dhanka biyo bixinta ah.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Wadanka Finland, biyaha tuubadu, sida xeerku sheegaayo, waa kuwo la cabi karo. Waad kasoo iibsan kartaa biyaha dhalooyinka ku jira dukaanada iyo daba kaayooyinka. Biyaha waa in lagu kaydiyaa haamo gaar ah oo nadiif ah oo dabool leh ama qasacyo waawayn oo nadiif ah kuwaasoo leh daboolo loo sameeyay in biyaha lagu kaydiyo.
Waa intee qiimaheedu? Qiimuhu wuxuu ka biloowdaa € 1/dhaladiiba.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaannada adeegga, daba kaayooyinka, suuqyada waawayn, xarumaha shidaalka.
Arin muhiim ah inaad ogaato Qofku wuxuu u baahan yahay ku dhawaad 2 liitar oo biyo nadiif ah oo uu cabo maalin kasta. Waxaa intaas dheer, biyaha ayaa loogu baahan yahay cunto karinta iyo nadaafada. Xasuusnoow in biyaha ku jira taangiyada gaarka ah la cabi karo kaliya dhawr maalmood. Qaybinta biyaha ayaa cilad gali kartaa. Haddii sun laga helo tuubooyinka biyuhu maraan, maamuladu waxay mamnuuci karaan adeegsiga biyaha tuubada ama waxay soo saari karaan amar ah in biyaha la kululeeyo. Dhibaatooyinka dhanka tayada biyaha ka dhalan kara ayaa lagusoo gudbiyaa warbaahinta. Markay cilad muddo dheer ah gasho tuubooyinka biyaha, dawlada magaalada ayaa diyaarinaysa meel ay dadku ka helaan biyaha xaaladaha degdega ah. Xasuusnoow in xayawaanada rabaayada ah ay sidoo kale u baahan yihiin biyo.
Boorsada alaabta xaaladaha degdega ah ee guriga
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Masiibooyinka dabiiciga ah sida daadadka, go'ista korontada, ama barafka culus ayaa kaa hor istaagi kara inaad dukaan aado. Isla xaaladaas ayaa imaan karta, tusaale ahaan, marka uu dilaaco xanuun ama shil dhaco. Xaaladaha noocaas ah ayaa u baahan boorsada alaabta xaaladaha degdega ah ee guriga ayna ku jiraan cuntooyika oo la gasho qaanadaha dhaadheer ee aad gashn karto cuntada aad cunto iyo dabeecadahaaga wax cunista.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Markaad guriga joogto, markaad safrayso ama aad ku jirto guri yar.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Waa wax fiican inaad cunto kayd ah dhigato guriga, taasoo aad si fudud uga samaysan karto cunto xataa marka ay jiraan xaaladaha degdega ah, sida marka korontadu go'do. Cuntooyinka la kaydiyo waa inay noqdaan kuwo nafaqo leh oo laga dhargo. Tusaalayaasha fiican waxaa kamid ah cuntooyinka qasaca ku jira, miraha la qalajiyay, boorashka degdega loo kariyo, shurbada, baastada diyaarsan, khudaarta xididka ah, cunto qalalan sida xaleefyada baradhada iyo rastada.
Xagee ayaan kasoo iibsan karaa? Suuqyada waawayn, dukaanada adeegga, daba kaayooyinka.
Arin muhiim ah inaad ogaato Marka cilada adeeg goyn ah dhacdo, alaabaha cusub iyo kuwa talaagada la gasho ayaa marka koobaad la isticmaalaa. Haddii aysan joogin koronto, waxaa lagu talinayaa inaadan furin talaagada si aad uga ilaaliso cuntada inay neefsato. Haddii korontadu muddo dheer maqnaato, waxaa fiican inaad karsato ood adeegsato cntada talaagada ku jirta. Marka korontadu baxdo, cunta ayaa la karin karaa, tusaale ahaan, ayadoo lagu karnaayo shoolad. Fadlan ogoow in go'itaanka korontadu aysan kaliya kaa hor istaagayn inaad shidaal kasoo buuxsato goobta shidaalka iyo iibsiga cunto, laakiin ay sidoo kale cilad galin karto xariirada taleefanka. Qalabka shidaalka bambeeya, nidaamyada lacag bixinta iyo taleefanka moobilka waxaa dhammaantood lagu dabeeyaa koronto. Qaabkeeda ugu fudud, cunto la kaydiyay ayaa noqon karta misir leh maraq (khudaar ku jirto) taasoo si fudud loo karsan karo ama xataa ayadoo qaboow la cuni karo markay xaalad degdeg ah jirto. Warbixin dheeraad ah: www.72tuntia.fi ÂŠ Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Boorsada Gurmadka Degdega ah
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Waxyaabaha ku jira boorsada gurmadka Degdega ah ayaa ku siinaaya adeegyada aasaasiga u ah gurmadka degdega ah haddii ay jiraan dhaawacyo ama waxyeelooyin yaryar. Markay jiraan dhaawacyo daran, qaad talaabada ku haboon: wac 112 ama raadso daryeel caafimaad markaad hesho gurmadka degdega ah.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Gurmadka degdega ah waxa aloogu tala galay dhaawacyada iyo waxyeelooyinka. Markaad guriga joogto, jidka marayso, aad baaskiil wado iyo markaad guri yar ku jirto.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Baro saasiyaadka gurmadka degdega ah oo hayso xirfadahaaga. Iibso alaabaha gurmadka degdega ah: ugu yaraan faashadaha, baadheejyada iyo maqasyada iyo sidoo kale xanuun baabi'iyaasha. Markuu dhaco shil, raadso alaabaha ku haboon dhaawaca ee ku jira boorsada. Daawee dhaawaca. Xasuusnoow inaad xirato galoofyada difaaca iyo inaad caabuqa ka disho dhaawacyada.
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabmaan 15 â&#x201A;Ź.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Farmashiilayaasha, suuqyada alaabta, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Waa wax fiican in aad haysato boorsada gurmadka Degdega ah oo guriga ku taalla. Boorsada gurmadka Degdega ah ee yaryar ayaa laga helaa gaariyaasha, safarka iyo guryaha yaryar. Waxaad sidoo kale sidoo kale dooran kartaa alaabaha aad gashanayso boorsada gurmadka degdeg ah Halkii aad boorsada gurmadka Degdega ah dhigan lahayd guriga, waa wax fiican inaad lahaato qaanada daawada oo ay ku jiraan dookhyo badan oo alaabaha gurmadka degdega ah. Markasta gasho alaabaha boorsada gurmadka Degdega ah ama alaabta gurmadka Degdega ah hal meel si ay kuugu fududaato inaad soo qaadato markaad u baahato. Si joogto ah u baro isticmaalka alaabta gurmadka degdega ah. Alaabaha ku jira boorsada gurmadka Degdega ah way kala duwanaan doonaan ayadoo ku xiran shirkada samaysay iyo adeegsiga gaarka ah ee loo sameeyay. Hubi waxyaabaha kujira boorsooyinkaaga gurmadka degdega ah si joogto ah. Ogoow in alaabta ku jirta muddo dheer qaanada ay liidayso tayada alaabaha qaarkood. Waxay lahaan karaa taariikhda 'ay dhacayaan". Qashinka ku dar alaabaha dhacay ama aad isticmaashay kuna badalo kuwo cusub. Alaabaha gurmadka degdega ah ayaad kasoo iibsan kartaa farmashiyaasha. ÂŠ Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Maareeyaha kaniiniga/bokisku waa qaanad daawada lagu kala xiro. Wuxuu ka caawinayaa qofka u bahaan daawada inuu daawada kala nidaamsado wuxuuna fududeeyaa kuurada iyo cunista daawada. Maareeyuhu wuxuu fududaynayaa si loo arko in kaniiniyada la cunay iyo in kale.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Maareeyaha kaniiniga waxaa lagu adeegsadaa guriga, laakiin waa wax yar ood qaadan karto.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Maareeyaha asbuuc laha ah ayaa loo adeegsan karaa in dawada loo kala saaro asbuuca oo dhan waqtiyo kala duwan oo maalinta ka mid ah (subixii, maalintii, fiidkii, habaynka).
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabmaan 10 €.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Farmashiilayaasha, dukaanada alaabaha guriga, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Wuxuu xaqiijinayaa in daawada si sax ah loo cuno! Waxaa sidoo kale mashiinada kala duwan oo daawada lagu kala saaro oo laga helo suuqa ama daawooyinka oo lagu kala qaybiyay baakado qolado leh. Labaduba waxay noqon karaan kuwo caawimaad wayn leh, tusaale ahaan, dhanka waqtiyaynta daawada si uu u xasuusto qofka xiska ka jiran. Ogsoonoow in maareeyaha kaniiniga qudhiisu uusan damaanad qaadi karin in daawada la cuni doono ama in la cuni doono waqtiga saxda ah. Xaqiiji waqtiga iyo cunista kuurada daawada.
Jaranjarada Wax lagu fuulo
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Jaranjarada Wax lagu fuulo waxaa loo adeegsadaa badqabka dhammaan shaqooyinka kormeerida, dayactirka iyo hawlaha guriga ee u baahan in meel la koro.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Guriga markaad joogto, jaranjarada la duubo waxaa loo adeegsadaa dhammaan shaqooyinka u baahan in meel la fuulo ama la gaaro, sida rakibida ganbaleelka qiiqa oo lagu xiro safiitada, badalida bir qabatooyinka daahyada.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Iibso jaranjaro joog dheer leh, adoo niyada ku haynaaya jooga qolalka gurigaaga. Markasta saar jaranjarada meel siman si aysan u dhicin ama u durkin.
Waa intee qiimaheedu? Qiimaha jaranjarooyinka ka samaysan almuuniyaamku wuxuu ka biloowdaa â&#x201A;Ź 30-50.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada qalabka dhismaha, subar maarkeedyada.
Arin muhiim ah inaad ogaato Dhicista iyo dilindiloodku waa sababaha ugu badan ee keena shilalka dhimashada wadanka Finland. Waxay sidoo kale keenaan qarashaad aad u badan oo ku baxa daryeelka caafimaadka. Iska ilaali inaad dhacdo adoo soo iibsanaaya jaranjarano fiican una adeegsanaaya dhammaan meelaha aad fuulayso. Xaqiiji in lugaha jaranjaradu ay leeyihiin xanafta ka hortagta sinbirirqashada aadna saarto meel aan sibibix ahayn. Ogoow in shirkadaha guryaha sameeya ay iibsan karaan jaranjarooyinka caadiga ah oo dadku soo daynsadaan. Haddii awoodaada shaqadu naafo tahay, meelna ha korin. Taas badalkeed, codso caawimaad
Koofiyada Baaskiilka / Koofiyada Badqabka
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Koofiyada difaacu waxay kaa celinaysaa dhaawacyada madaxa iyo maskaxda. Sharciga Wadooyinka ayaa waajib ka dhigaaya in dadka baaskiilka raaca ay xirtaan koofiyadaha baaskiilka.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Mar kasta xiro koofiyada markaad baaskiil wado. Haddii aad sido qof kale, sida ilmo yar, adoo baaskiil wata, waxaa qasab ah in ilmuhu sidoo kale xidho koofiyada. Sidoo kale waa fikir fiican inaad adeegsato koofiyada markaad saaran tahay kabaha taayirada leh, iskuutarka ama kabaha barafka. Koofiyada waxaa sidoo kale loo adeegsadaa ciyaaraha barafka iyo wadista faraska.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Waxaa jiro noocyo kaladuwan oo koofiyado ah: Dooro midka buuxin karta yoolkaaga. Koofiyadu waa inay le'ekaataa madaxaaga ayna noqotaa wax ku haboon xirashada. Blaari koofiyada oo xir xariga garka. Koofiyada waa inaadan aad u giijin ama aad u dabcin si ay madaxaaga ugu jirto.
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabataa € 20.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada alaabaha guriga, suuqyada, dukaanada oonleenka ah, dukaanada alaabaha ciyaaraha.
Arin muhiim ah inaad ogaato Koofiyadu waa inay tahay mid ay ansixisay CE. Koofiyada Baaskiilka waa in la badalaa markay gasho shil ama wax kale waxyeeleeyaan. Koofiyada xajmi kugu haboon iyo rakibaad wanaagsan leh waxay ku siinaysaa difaaca ugu fiican. Koofiyadaha midabka hilaacaaya leh ayaa kor u qaada araga markaad jidka marayso. Ha iibsan koofiyada lasoo isticmaalay waayo ma ogid in waxyeelo kasoo gaartay shilal hore. Marka laga soo tago koofiyada difaaca, sidoo kale soo iibso qalabka kale ee difaaca oo loogu baahan yahay ciyaar kasta!
Gacanka la qabto (Gacanka badbaadada)
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Gacanka la qabto wuxuu kor u qaadaa badqabka dhaqdhaqaaqa. Gaarista iyo ku socoshada ayaa ah kuwo fudud marka aad gacan u adeegsan karo taageero.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Markaad guriga joogto, gacanada la qabto ayaa lagu rakibaa meel kasta oo uu qofka guriga dagan u baahdo. Waxxaa lagu xiri karaa, tusaale ahaan, musqusha, jikada iyo meesha u dhaw sariirta. Qalabka gacan qabsiga ee taageerada ah waxaa sidoo kale lagu xiri karaa bala koonada iyo geesaha jaranjarada.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Cusko gacanka. Wuxuu kaa caawinayaa inaad ka istaagto kursi ama sariir. Wuxuu ku siinayaa taageero markaad soconayso.
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabataa €5.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? dukaanada alaabta guriga, dukaanada qalabka dhismaha, dukaanada oonleenka ah
Arin muhiim ah inaad ogaato Dooro gacan qabsi aan sibix ahayn in kugu filan inaad qabsato. Gacanka waa in si adag loo adkeeyo looguna dhajiyo meesha ku haboon, tusaale ahaan darbi. Sidoo kale dareen sii midabka gacanka. Gacanka leh midabka wirqaaya ayaa fudud in la arko markuu ku dhagan yahay darbi layr leh. Inaad ku xirto gacanada la cuskado qolalka qoyan ayaa u baahan inay fasaxdo shirkada guriga leh. Ha ilaawin inaad biyaha ka difaacdo aadna ku daboosho wax qoyaanka ka dhawra.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Tooshka madaxa waxa alagu xirtaa madaxa kore ama, tusaale ahaan, koofiyad suuf ah. Wuxuu u sahlayaa inaad labada gacmoodba uga shaqasyo meesha mugsiga ah, tusaale ahaan. Layrka madaxa ayaa sidoo kale ka dhigaaya qofka uu ku xiran yahay mid ay arki karaan gaariyaashu si fudud.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Tooshka madaxa waxaa loo adeegsan karaa layr dheeri ah ahaan iyo inaad shaqo ka qabato meel mugdi ah, ku lugaynta kaymaha, akhrinta qariirada, ku socoshada meelaha banaanka e mugdiga ah ama soo wareejinta eeyga xiliga qorax dhaca. Guri kasta waa inuu lahaado tooshka madaxa haddii korontadu tagto.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Aalada tooshka madaxa lagu xirto waxaa lagu xirtaa madaxaaga. Daar tooska adoo adeegsanaaya batoonka laga daaro. Tooshka ayaa intaas kadib lagu aadin karaa dhanka loo baahan yahay.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada alaabta guriga, dukaanada oonleenka ah, dukaanada alaabaha banaanka lagu ciyaaro iyo dalxiiska.
Arin muhiim ah inaad ogaato Waxaa jiro tooshash la jaajar gareeyo iyo kuwo beytari ku shaqeeya labadaba. Xaqiiji inaad tooshka jaajar garayso si joogto ah. Haddii tooshashku ku shaqeeyaan beytari, markasta xaqiiji inaad haysato beytari dheeri ah. Halkii aad ka gadan lahayd laanbada madaxa, waxaad ku badali kartaa toosh. Tooshashka layrka madaxa ayaa ka faa'iido badan waayo waxay ku siinayaan inaad labada gacmood ba ku shaqayso, qaadashada alaabaha ama furista albaab, tusaale ahaan.
Cago saarta ka hortagta sinbiqashada
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Cago saarta ka hortagta sinbiqashada oo la gasho hoosta roog ama Cago saarta ka hortagta sinbiqashada ayaa ka hortaga sinbiqashada iyo kufista joogtada ah. Cago saarta ka hortagta sinbiqashadu waxay kor uqaadi karaan amaanka gudaha guriga. Cago saarta ka hortagta sinbiqashada waxay kor u qaadaa badqabka markaad u socoto musqusha ama markaad qubaysanayso.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Cago saarta ka hortagta sinbiqashada, jaanta ama rakada, waxaa la hoos gashaa roogaga lagu sinbaqado. Waxay aad ugu haboon tahay qoysaska haysta carruurta iyo, tusaale ahaan, guryaha dadka duqoowda ah. Cago saarta ka hortagta sinbiqashada waxaa loo adeegsan karaa musqulaha.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Cago saarta ka hortagta sinbiqashada ama jaanta ayaad soo ibsan kartaa ayadoo cad ah ama mitir lagu cabiray. Saar cad rooga le'eg oo jaanta sinbiqashada ka hortagta ah hoosta rooga. Waa inaysan ka muuqan rooga hoostiisa. Cago saarta ka hortagta sinbiqashada ee la dhigo qololka qoyan ayaa la helaa ayagoo ah jaaman diyaarsan. Waxaa la dhigaa sagxadaha musqusha, hoosta meesha shaawarka ama salka baafka qubayska.
Waa intee qiimaheedu? Jaanta ka hortaga sinbiqashada qiimaheedu wuxuu ka biloowdaa € 3/mitirkiiba. Caga saarta ka hortagta sinbiqashada qiimaheedu wuxuu ka biloowdaa € 20.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada suufka, dukaanada alaabta guriga, dukaanada oonleenka.
Arin muhiim ah inaad ogaato Haddii roogu keeno halis ah in qofku ku kufo, qiimayn ku samee inaad ku badali karto mid ka badbaado fiican, tusaale ahaan, roog, ka dhuuban. Rooga keenaaya halis ah inaad dhacdo ayaa, ugu danbayn, la dari karaa qashinka.
Jaakadaha dabaasha / Jaakadaha nolosha
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Jaakadaha noloshu waa qaabab qasab ah oo qofku ku badbaado markuu biyaha dul maraayo. Haddii qofku ka dhaco doonta, jaakadaha nolosha ayaa u suuro galinaysa inuu biyaha dul heehaabo intuu sugaayo caawimaad. Jaakadaha noloshu waxay leedahay midab dhalaalaaya, oo wirqaaya kaasoo sahlaaya in la arko lana helo qofka xiran.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Jaakadaha nolosha waxaa loo adeegsadaa raacista doomaha, doomanka matoorka ku shaqeeya ama kuwa waawayn, ama gaadiid kale oo badda mara. Qof kasta oo doonta saaran waxaa qasab ah inuu xirto jaakadaha nolosha. Carruurta yaryarka ah, jaakadaha nolosha ayaa sidoo kale fiican in loo xiro markay xeebta joogaan.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Waxaa noocyo aad u badan oo jaakadaha nolosha ah. Ku xulo si waafaqsan isticmaalkeeda. Tijaabi jaakadaha nolosha ka hor intaadan iibsan. Jaakadaha noloshu waa inay noqdaan kuwo leh balaar ku filan inaad gashato, laakiin ay ahaadaan kuwo in kugu filan kugu dhagan si aysan kaaga bixin. Jaakadaha nolosha waa in loo gashtaa si waafaqsan tilmaamahooda. Ka hor intaadan isticmaalin jaakadaha nolosha, xaqiiji inaysan qabin wax cilad ah.
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabataa €30.
Arin muhiim ah inaad ogaato Jaakadaha noloshu waxay kaliya badbaadin karaan qof haddii si saxan loo xirto marka qofku ku dhaco biyaha. Markaad iibsanayso jaakadaha nolosha, xaqiiji inay ku taalo astaanta CE.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Jaakadaha wirqa iyo kuwa ilayska soo iita waxay kor u qaadaan araga iyo badbaadada dadka wada goynaaya iyo layrarka kale ee taraafiga ee ku xiran meelaha mugdiga ah.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Iftiin jiitayaasha ayaa la adeegsan karaa markaad banaanka u baxdo xiliyada mugdigu jiro. Jakaadaha iftiinka soo jiita ayaa sidoo kale loo xiraa carruurta yaryar si looga caawiyo in si fudud loo arko. Jaakadaha iftiinka soo jiita waxaa loo adeegsadaa shaqooyin badan si loo xaqiijiyo aragtida. Markasta gasho jaakadaha iftiinka soo jiita gudaha gaariga. Haddii aad doonayso inaad istaagto ood gaariga ka baxdo markaad safrayso, marka koobaad xiro jaakadaada si dadka kale ee wada isticmaalaaya kuu ogaadaan.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? hJaakada iftiinka jiida ayaa lagu xiri karaa jaakadaada ama waxaad adeegsan kartaa iftiin jiidayaal kale. Iftiin jiidaha waxaa lagu xariirin karaa biinka amaanka oo ku xiran jaakad ama boorso. Cinjirka jiidma ee Iftiin jiidaha ayaa lagu dhajiyaa gacanta jaakada, gabta ama lugta surwaalka. Iftiin jiidayaasha Velcro waxaa lagu dhajin karaa meeshaad doonto. Waa wax wanaagsan inaad isticmaasho iftiin jiidayaal kala duwan isku mar. Jaakada iftiinka soo jiida waxaa laga dul gashtaa dharka kale. Waxaa jiro noocyo badan oo jaakadaha iftiinka jiida ah. Xiro jaakad wayn oo ku filan inaad dharka kale ka dul gashato.
Waxay ka bilaabataa €2. Shirkadu badan iyo ururo ayaa qaybiya jaakadaha iftiinka jiida oo bilaash ah xiliyada dayrta.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaannada alaabta guriga, suuqyada waa wayn, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Markaad iibsanayso iftiin jiidayaal ama jaakadaha ilayska, xaqiiji inay leeyihiin astaamaha CE iyo EN. Fadlan Ogsoonoow in boon balayaal sida iftiin jiidayaasha ah, kuwaasoo aan soo jiidin iftiin kugu filan, sidoo kale suuqa lagu gado, laakiin maaha iftiin jiidayaal! Xasuusnoow inaad nadiifiso jaakadaha iftiinka soo jiida. Ka difaaca (tusaale ahaan markay gaarig ku jirto) iftiinka iyo wasaqda. Haddii jaakada iftiinka soo jiida wasaqoowdo, dhaq. Fadlan ogoow in dhaqista joogtda ah ay yaraynayso awooda iftiin jiidashada ee jaakada. Soo iibso jaakad cusub markaad u baahato. © Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Layrka habaynkii waxaa loo adeegsadaa iftiinka muhiimka u ah mugdiga. Wuxuu kuu sahlaayaa inaad ku dhex socsocoto guriga waayo waxaad arki kartaa aaga kugu xeeran. Khatarta dilindiloodka iyo dhicista ayaa yaraanayso. Layrka habaynkii wuxuu kuu sahlayaa inaad hesho meesha layrka laga daaro.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Layrka habaynkii waxaa la dhigi karaa, tusaale ahaan, qolka jiifka iyo, haddii loo baahdo, aaga dadku ku socdaan. Layrka habaynkii ayaa sidoo kale la dhigi karaa jaranjarada ama fagaaga.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Layrka habaykii waxaa lagu dhajiyaa bareeska darbiga (dab qaybiyaha). Layrka habaynkii ayaa shidnaan kara markasta ama waxaa lagu xiri karaa qalabka iftiinka dareema kaasoo layrka shidaaya markay mugdi noqoto. Waa layrka habaynkii lagu xiri karaa qalabka dareema socodka uuna si ootomaatig ah u shidmo marka qof uu soconaayo.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada alaabta guriga, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Layrarka habaynkii waxay ku imaadaan midabyo kala duwan. Dooro layrka habaynkii si midabka layrku u noqdo mid u fududaynaaya qofka guriga dagan inuu aqoonsado waxyaabaha asagoo wax cabsi ah daremin ama uusan abuurin hoos khiyaano ah. Sidoo kale ogoow inay jiraan layrar iyo laanbado oo lagu rakibay qalabka dareema dhaqdhaqaaqa oo suuqa yaala. Waxaa loo adeegsan karaa laambad kasta wuxuu badali karaa layrka habaynkii. Layrka ayaa shidmaaya markaad gasho qolka kadibna layrka ayaa damaaya markaad guriga ka baxdo ayadoo uu daahaayo marka qofku guriga dhex fariisto uuna ka baxo qolka. Xaqiiji in layrku shidnaado muddo ku filan. Laambadaha leh qalabka dhaqdhaqaaqa la socda ayaa ku haboon ku dhawaad qol kasta. Ogsoonoow in layrka habaynkii ee leh qalabka dhaqdhaqaaqa la socda uusan ku haboonayn qof xisla la'. © Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Suumanka kursiga iyo Kursiga badbaadada
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Adeegsiga suumanka kursigu waa waajib markaad saaran tahay gaariyaasha iyo basaska hadday lee yihiin suumanka kursiga. Suumanka kursigu waxay ku difaacayaan marka shil dhaco. Adeegsiga kursiga badbaadada carruurta ama kursiga kaalmaatiga ee ku jira caasiyaasha ama gaariyaasha ayaa qasab ku ah carruurta ka gaaban 135 cm. Kursiga badbaadada ilmaha ayaa ilmaha ku xajinaaya si badbaado leh difaacna siinaaya marka shil dhaco.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Gaariga, baaskiilka.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Suumanka kuraastu waa qalab heer caadiga ah oo lagu keeno gaariyaasha. Kuraasta badbaadada ilmaha si gaar ah ayaa loo soo iibsadaa waxaana lagu dhajiyaa kursiga gaariga ama baaskiilka si waafaqsan tilmaamaha rakibidiisa. RAAC TILMAAMAHA RAKIBAADA IYO ADEEGSIGA. Ilmaha waxaa lagu dhajiyaa kursiga ilmaha ayadoo lagula xiraayo suumanka kuraasta ee gaarigu horay u lahaa, kuwaasoo u baahan in si fiican loo adkeeyo. Markay carruurtu ka yar yihiin sadex sano, qaabka ugu amaanka badan ee loogu qaado safarka gaariga waa in la fariisiyo kursiga danbe, ayadoo kursigu gadaal u jeedo. Haddii aan cunugu galayn kursiga carruurta, adeegso barkimaha kor u qaadaaya.
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabataa €50.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada carruurta, dukaanada alaabta guriga, dukaanada oonleenka
Arin muhiim ah inaad ogaato Markaad iibsanayso kursiga badbaadada ilmaha, xaqiiji inay leedahay aqoonsiga CE iyo ECE. Kursiga badbaadadu wuxuu ahaanayaa mid badbaado leh ku dhawaad shan sano, kadib marka qaab dhismeedkeeda caaga ah dhado. Kursiga badbaadada gaariga galay shilka waa inaan dib loo isticmaalin waayo waxaa suuragal ah in qaab dhismeedkiisa waxyeelo gaartay. Ilmuhu waa inuusan marna ku fariisan dhabtaada markaad gaari ku safrayso! Ilmo kasta oo ka gaaban 135 cm waa in lagu fariisiyaa lursga badbaadada gaariga oo gaar ah ama barkinta kor u qaadaysa.
Dacaska iyo sigisaanta aan sinbiqanayn
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Dacaska iyo sigisaanta aan sinbiqanayn waxay siiyaan cagta diiranaan waxayna ka difaacaan inaad ku sibqato meelaha sidibta ah.
Xagee ayaan u adeegsan karaa? Dacaska ama sigisaanta waxaa loo adeegsan karaa meel kasta oo guriga kamid ah.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Dacaska axaa la adeegsan karaa adoo sigisaan qaba ama aan qabin.
Waa meeqa qiimahoodu? Waxay ka bilaabataa € 5.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada waaxda, dukaanada kabaha, dukaanada oonleenka ah
Arin muhiim ah inaad ogaato Banaanka ha u bixin adoo xiran sigisaanta gudaha xataa muddo yar. Cagaftooda hoose ayaa noqon karta mid aad loogu sinbiqan karo banaanka. Ogoow in cagafta hoose ee dacsku ay sidoo kale murxayso, taasoo yaraynaysa difaacooda. Dacaska iyo sigisaanta waa inay ahaadaan says ku le'eg. Ogoow in sigisaanta aan sinbiqanayn aysan ku haboonayn qof kasta. Markasta hubi inay kugu haboon yihiin sigisaanta iyo dacaska si qodob-qdob ah.
Kabaha ciribta leh iyo kabaha leh cagafta simbiqashada ka hortagta
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Kabaha ciribta leh, saarista jaan cagafta kabaha ama xirashada kabaha leh cagafta simbiqashada ka hortagta waxay kaa difaacaysaa inaad dhacdo markaad marayso banaanka mee sidib ah. Waxay fududeeyaan amaanka iyo raaxada socodka banaanka, adoon ka cabsi qabin inaad sidbato.
Xagee ayaan u adeegsan karaa? Waxaad ku xiraysaa kabaha aad ku aadayso banaanka meelaha sidibta ah.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Shaagag ayaa markasta lagu xiraa salka hoose ee kabaha ciribta leh iyo buudka. Ayadoo ku xiran naqshada, kabaha leh cagafta simbiqashada ka hortagta waxaa lagu dhajiyaa salka ama suulka kabta. Shaagaga kabaha waa inaan lagu adeegsan gudaha guriga, taas badalkeedna waa in la iska baxshaa marka guriga la galaayo
Waa meeqa qiimahoodu? Kabaha gaarka ah ee kabaha leh cagafta simbiqashada ka hortagta waxaa la gadaa ku dhawaad â&#x201A;Ź 10/joogiiba.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada oonleenka, dukaanada kabaha, subar maarkeedyada.
Arin muhiim ah inaad ogaato Waxaa jiro noocyo iyo saysas kala duwan oo ah kabaha leh cagafta simbiqashada ka hortagta. Markaad iibsanayso cagafta kabaha, dooro xajmiga ku le'eg ee kabtaada. Taas badalkeed, waxaad iibsan kartaa cabo cirib leh oo lagu xiray cagaf. Waxaa sidoo kale jira buudka xiliga jiilaalka oo cagaf adag leh ood ka helayso ood cagafta lagasoo bilaabo gudaha laguna xiraayo salka laguna socon karo gudaha guriga, sidoo kale. Halka aad ka iibsanayso cagafta, waxaa kobcin kartaa kabaha jiilaalka adoo ka codsanaaya dukaanka kabaha dayac tira inuu kaa badalo cirbaha ama cagafta kabaha asagoo kuu saaraaya wax qabatin fiican leh.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Cinjirka difaaca waxaa loo sameeyay in lagu ilaalsho laguna xoojiyo dhismaha murqaha. Awoda kugu filan ee murqaha ayaa muhiim u ah dhaqdhaqaaqa iyo isku dheeli tirnaanta wacan. Jir dhisnaanta waca waxay ka hortagtaa dhicitaanka, waxay kor u qaadaa badqabka, waxayna kordhin kartaa dareenkaaga amaanka.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Cinjirka difaaca axaa loo adeegsan karaa meel kasta waana wax fudud in laqaado sabab la xariirta xajmigiisa yar. Waxaa loo adeegsan karaa gudaha iyo banaanka labadaba.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Ka fiiri baakada tilmaamaha sida aad u adeegsanayso. Cinjirka difaaca waxaa loo adeegsan karaa in lagu xajiyo awooda murqaha gacmaha, lugaha iyo jirka oo dhan.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaannada alaabta guriga, dukaanada alaabta ciyaaraha
Arin muhiim ah inaad ogaato Cinjirka difaaca waxa xiran kara dadka oo dhan ayadoon laga eegayn da'da. Mararka qaar, waxaa fiican inaad la tashato dhakhtarka jirka ka hor intaadan bilaabin tababar ku gaar ah. Cinjirada difaaca ee siman iyo ku sida miiska ah ayaa la iibshaa. Waxaa la helaa ayagoo leh gacan iyo ayagoon lahayn. Gacanadu waxay ku siinayaa qabatin adag. Gacanada waxaa lagu dhajin karaa xakabada albaabka ama aaga cagta, ayadoo ku xiran nooca jimicsiga.
Gambaleelka Sunta Kaarboonka
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Ganbaleelka sunta kaarboonku wuxuu cabiraa uuna kaaga digayaa haddii gaaska sunta kaarboonku soo galo qolkaaga. Sunta kaarboonku waa gaas khatar ah oo dabka kiciya dhibaatada ka dhalatana waa mid degdeg ah oon la ogaan karin (waa sun aan ur iyo dhadhan midna lahayn). Mar horaba cadad yar oo kamid ah, ayuu ku sababi karaa dhibaato iyo inaad miyir beesho. Ku sumoobida daran ee sunka kaarboonku waxay keeni kartaa geeri.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Gambaleellada Sunta Kaarboonka waxaa laga heaa dhamaan guryaha iyo guryaha lagu nasto ee adeegsada xaabada ama kariyaasha gaaska, goobaha dabka, shooladaha lagu shido xaabada ama dababka kale ee furan.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Sunta kaarboonku waay raacdaa hawada waayo way ka fududahay dabaysha. Meelaha ugu fiican ee la dhigo ganbaleelka sunta kaarboonka waa darbiga, mana ahan safiitada. Markasta raac tilmaamaha rakibaada ee shirkada soo saarta qalabka. Ganbaleelka sunta Kaarboonku wuxuu yeeriyaa dhawaaq haddii uu cabiro cadad halis ah oo sunto kaarboonka ah oo ku jirta qolka. Qaar kamid ah ganbaleellada sunta kaarboonku waxay kaliya yeeriyaan ganbaleel, qaarkoodna waxay sheegaan cadadka sunta kaarboonka ee banaanka usoo baxday. Shaqada ganbaleelka sunta Kaarboonka, sI LAMid ah GANBALEELKA DABKA, waa in si joogto ah loo tijaabshaa adoo adeegsanaaya batoonka tijaabinta.
Waa intee qiimaheedu? € 15 - 40 (kan ugu raqiisan maaha inuu yahay kan ugu fiican).
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? dukaanada alaabta guriga, suuyada, dukaanada qalabka dhismaha, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Markaad iibsanayso ganbaleelka sunta kaarboonka, xaqiiji inuu leeyahay calamadaha CE iyo SFS-EN. Kaar kamid ah qalabka kaarboonka la socda ayaa muujiya heerkulka; xaqiiji inaad u jeedo cadadka saxda ah. Qalabka sheega sunta kaarboonku ma badalaayo qalabka sheega qiiqa, laakiin waa difaac dheeri ah. Marka laga reebo ganbaleelka sheega sunta Kaarboonka, waxaa qasab ah inaad lahaado ganbaleelka qiiqa oo girga kuugu xiran. Baro sida loo adeegsado jikada dabka si fiican.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Si aad u damiso dab kahor intuusan faafin. Dab damiyaasha laqaadan karo ayaa sidoo kale loo adeegsan karaa in lagu xakameeyo dabka ilaa waaxda dab damisku ka imaanayso.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Qalabka dab damiska ah ayaa loo adeegsan karaa in lagu damiyo dabka ka kaca gudaha iyo banaanka guriga. Qalabka dab damiska guriga ayaa lagu adeegsan karaa guriga, gaari guriga, doonta, gaariga iyo safarka. Qalabka dab damiska ayaa sidoo kale laga helaa dhammaan goobaha dad waynaha.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Marka dab kaco, soo qaado qalabka dab damiska oo ka saar daboolkiisa amaanka. Qabo salka duleelka ganta, riix gacanka oo ku aadi buufinta dabka daminaysa salka meesha dabku kasoo baxaayo. Siaas kusii wad ilaa dabku ka damo ama aariyada dab damisku ka dhamaato. Haddii dabku isla markiiba damo, ha iska khasaarin aariyada dab daminta ee qasaca ku hartay. Dabka ayaa soo kici kara waxaana laga yabaa inaad qalabka dab damiska u baahato mar kale.
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabataa â&#x201A;Ź 20.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaannada qalabka guriga, dukaanada qalabka badqabka, dukaanada alaabta dhismaha, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Markaad iibsanayso qalabka dabka damiya, xaqiiji inuu leeyahay astaamaha CE iyo SFS-EN ayna ku haboon tahay waxa aad u adeegsanayso. Qoralaka ku dhaqan aalada dab damiska ayaa sheegaysa nooca dababka aaladu damin karto sida ugu fiican. Inkastoo dab damiska budada ah uu si fican u damiyo dabka, haddana budada ayaa ku faafta meel kasta. Dab damiyaasha dareeraha ah ayaa ku haboon in loo adeegsado gudaha guriga. Dareeraha ayaa ka fudud in la nadiifiyo marka loo fiirsho kan budada ah, laakiin dab damiska dareeraha ah wuxuu kaliya ku shaqayn karaa goobaha heerkulku uusan ka hoosayn heerka qaboojinta. Qalabka dabka damiya waxay ku yimaadaan xajmiyo kala duwan. Markaad iibsanayso qalabka dabka damiya, xaqiiji inaad leedahay awood aad ku xajiso. Xaqiiji in qalabka dab damiska la hubiyo si joogto ah. Ku badal qalabka dab damiska ee aad isticmaashay mid cusub sida ugu dhakhsaha badan. ÂŠ Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Shumacyada iyo banaanka ayaa kiciya dabka
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo?
Shumacyada ayaa abuura jawi qurxoon markay mugdi tahay banaanka guriga. Shumaca ayaa lagu badali karaa layrka, tusaale ahaan marka korontadu tagto. Shumaca ku shaqeeya nalka LED ayaa yareeya halista dabka waayo ma jiro holac ka baxaaya. Shumac LED ah wuxuu u egyahay shumaca runta ah.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Shumaca waxaad ku shian kartaa banaanka iyo gudaha guriga. Shumac LED ah ayaa badali kara shumaca runta ah. Wuxuu aad ugu haboon yahay qoysaska leh carruur iyo guryo ay joogaan xayawaan rabaayad ah, tusaale ahaan. Banaanka guriga ayaa sidoo kale lagu isticmaali karaa dabka la shito.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Shumaca waxa alagu shidaa taraq ama qarxiso. Shumaca saar meel aan dabku qabsanayn oo ah meel amaan ah. Waa inuusan jirin shay kasta oo dabku si fudud u qabsan karo oo u dhaw shumaca. Haddii aad qolka ka baxdo, dami shumaca. Shumacyada LED ku waxay ku shaqeeyaan beytariyaal. Salka hoose ee shumaca waxaa kuyaala batoon laga daaro/damiyo. Qaar kamid ah shumacyada LED ka ayaa leh waqti lagu xiro ama remuud laga hago. Dabka caadiga ah ee la shito ayaa lagu daari karaa banaanka meelaha furan. Waa macnuuc in lagu shito kalkoonada guriga. Waa inuu jiro aag wayn oo banaan oo ku xeeran meesha dabka lagu shidaayo.
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabataa €1.
Arin muhiim ah inaad ogaato Ku dhawaad dab qabsada boqol guri waxaa sababa shumacyo gudaha wadanka Finland. caadiyan, arintaan ayaa ka dhalata shuamaca oo ilaa salka gubta ama ku dhaca alaabaha ka hooseeya ama u dhaw kadibna dab qabadsiinaayo oo halkaas kasii faafinaaya. Sidoo kale, caaga shumaca ee xunshada shmacyada ee meel isku dhaw ku shidan ayaa isku darmi kara si ay holac u abuuraan. Ka fiirso suuragalnimada shumacyada LED si joogto ah. Markaad isticmaalayso, niyada ku hay in, tusaale ahaan, qof la ildaran xis la'aan uu si khaldan ugu malayn karo in shumacyada LED ku yihiin sida shumacyada caadiga ah oo kale uuna isku dayi karo inuu taraq ku shido. Haddii aad adeegsato shumacyada LED oo yaryar, xaqiiji in godkooda hoose ee beytarigu aysan galin gacanta ama afka carruurta. Marna cidlo ha uga tagin shumac ama dabka banaanka oo kaligood shidan. © Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Bokiska iyo fiilada lagu dheereeyo beytariga ee galbaleelka qiiqa
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Bokiska beyarigu wuxuu fududeeyaa inaad badasho beytariga ganbaleelka qiiqa. Arintaan ayaad samayn kartaa adoon meelna fuulin.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Ku isticmaal ganbaleelka qiiqa. Xaqiiji in beytariga bokisku uu ku haboon yahay ganbaleelka qiiqa.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Ku xariiri fiilada beytariga bokiska meesha beytariga looga xariirsho ganbaleelka. Dib meeshiisa ugu celi ganbaleelka qiiqa kuna dhaji fiilada safiitada iyo darbiga. Bokiska beytariga ku dhaji darbiga adoo gaarsiinaaya joog ku haboon. Ku xariiri beytariga geeska kale ee fiilada. Gali beytariga bokiska kadibna dabool. Kadibna tijaabi ganbaleelka qiiqa.
Waa intee qiimaheedu? € 12 - 35.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaannada Aaaladaha caawimaada, dukaanada qalabka badqabka dabka, dukaanada alaabta dhismaha, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Tijaabi GANBALEELKA DABKA adoo raacaaya qaabka caadiga ah halmar bishiiba. Badel beytariga haddii ay muhiim tahay. Beytariga way fududahay inaad bixiso ood badasho. Beytariga ayaa sidoo kale si fudud loo saari karaa haddii ganbaleel been ah uu soo dhaco, tusaale ahaan markaad cuntada karinayso, laakiin xaqiiji inaad badasho beytariga kadib markaad sifayso. U sheeg carruurta inaysan taaban bokiska.
Shoolad lagu shito xaabada ayaa dhaqan ahaan loo adeegsadaa cunto karinta iyo dab shidashada. Dabka la shito ayaa loo adeegsan karaa kululeeynta, ayadoo digsi lagu karinaayo ama in lagu abuuro jawi macaan. Guryaha cusub waxaa xaaladii dabka lagu shidan jiray badalay qalabka wax lagu karsado ee korontada ku shaqeeya, halka guryihii horana ay wali lahaan karaan shooladaha dhaqanka ee xaabada lagu shito.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Shoolad ama jikada dabka ayaa ooli kara guriga ama buulka la dago xiliga xagaayada. Goobaha kuleelaha ayaa lahaan kara shoolada xaabada lagu shito ama cauldron (sawir yar). Goobta dabka lagu shito ayaa noqon karta qol kasta. Goobaha banaanka ee halkaan ayaa lahaan kara dukaal leh bokiska dabka. Waxaa sidoo kale jira dab dugaalo la tuuri karo oo suuqa lagasoo iibsado. Kuwaan waxaa lagu adeegsan karaa banaanka kaliya.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Baro sida loo adeegsado goobta dabka adoo raacaaya tilmaamaha shirkada samaysay. Ku gub kaliya xaabada goobta dabka. Ku shid xaabada taraq ama qarxiso. Ka hor intaadan kicin, fur tuubada qiiqa iyo qalabka kasta oo la soocda hawada dabka. Ha xirin qiiq bixiyaha ilaa dabku ka damo si buuxda guluubyada digniintuna ay ka damayaan. Hadii aad dab baqtiiyaha xirto xili hore, gaasaska dabka ayaa gali kara qolka. Haddii aad dareento lalabo kadib markaad burjiada dabka ku shido, waxaa jiri kara sunta kaarboonka oo hawada ku jirta. Fur albaabada iyo daaqadaha qolka si ay u haawadaan kana bax qolka. Soo iibso GANBALEELKA SUNTA KAARBOONKA Ganbaleelku wuxuu kaaga digayaa suuragalnimada gaaska sunta kaarboonka. Aaga ka horaysa meesha aad dabka ku shido waa inay ka samaysan tahay alaabo aan dabku ka kicin ayna nadiif yihiin. Ka saar xanbushada qalabka la socda xaalada burjikada. Ku shub xanbushada dabka ee qabooday qasaca aan dabku qabsan karin.
Arin muhiim ah inaad ogaato Goobta dabka ayaa noqon karta meel furan ama waxa alagu xiri karaa albaabada dabka lagu shito. Waa wax fiican inaan adeegsato inaad dabool shabaq ah u xirto goobta dabka ee furan (sawirka) si aad uga hortagto in faniinada dabku gaaraan qolka. Burjikooyinka iyo tuubooyinka foornooyinka waa in la tirtiraa oo la hubiyaa sanadkiiba mar; markay yaalaan guriga buulka ah waa in la hubiyaa 2-3 sanada mar.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Sauna waa qayb ka mid ah qubayska nadaafada dhaqanka dadka reer Finland. Waxaad sidoo kale ku nasan kartaa jawiga diiran ee Sauna.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Sauna waxaad dhigan kartaa gurigaaga, shirkadaada guyaha, buulkaaga xiliga xagaayada ama waxay noqon kartaa sauna dadku wadagaaan, tusaale ahaan mid taala barkada dabaashada dadwaynaha.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Sauna waxay leedahay shoolad ay dabka ka qadato iyo kuraas lagu fariisto. Sauna waxaa lagu dabayn karaa xaabo lagu shido ama koronto. Arag kaarka GOOBTA DABKA si aad uga akhriso talaabooyinka dabaynta amaanka ah ee sauna da xaabada lagu dabeeyo. Sauna koronto ku shaqaysa waxay leedahay shoolad leh fiilooyika korontada. Shoolada waxaa lagu gubaa in batoonka dabka la shido. Heer kulka waxaa lagu xiraa xakameeyo u gaara. Ku xir waqti ilaaliyaha mudada aad rabto. Sauna ayaa la kululeeyaa ilaa 15-30 daqiiqo. Nidamaka xakameeya shoolada ayaa ku haya heerkulka mid siman ilaa laga damiyo ama waqti tiriyuhu ka damo. Markaad gasho barkada sauna iska siib dharkaaga, qubayso, kadibna ku fariiso kuraasta oo ku dagiigso jooga kursiga. Ku shub biyaha shoolada sauna ee kulul kadibna ku raaxayso biyaha quluqlaaya (löyly). Markaad hesho löyly kugu filan, mar kale qubayso. Daboolada kuraasta sauna waa la mayraa markaad isticmaasho. Waxaad sidoo kale adeegsan kartaa daboolada kuraasta oo la tuuri karo oo ka samaysan xaashi.
Arin muhiim ah inaad ogaato Akhri buuga tilmaamaha ee shoolada si aad u barato qaabka aad u adeegsanayso. Shooladu waa inay lahaaaa gan la qabto. Shooladu waa kululaanaysaa, marka ka taxadar si aadan u taaban. Biyaha kulul ayaa sidoo kale keeni kara gubasho. Sauna waxaa kaliya lagu adeegsan karaa marka qof wayn kormeeraayo. Carruurtu waa inaysan taaban taboonada laga daaro/ damiyo shoolada korontada ah. Sidoo kale ka ku xaraysan marna waxyaabo ama dhar qalalab qalabka sauna. KHATARTA DABKA! Haddii deegaankaagu leeyahay sauna koronto ku shaqaysa, laakiin aadan u adeegsan qubayska, ka saar fiilooyinka shoolada sauna adoo adeegsanaaya bokiska fiilada ama DAMI isku xiraha dabka ee ootomaatiga ah (Hoos u riix batoonka). Ku astee fiilooyinka la saaray ama la jaray qoraalka qeexan ee dhahaaya "Waa la damiyay".
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Waxaa mahadsan tiirada dabkeeda oo dheer, qrxisadu waxay fududaysaa shidista mid fudud waxayna kaa difaacaysaa inaad farahaaga gubto. Waa wax fudud inaad hesho waxayna ka shaqo wacan tahay taraqa.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Adeegso markaad shidayso dab ama shumac, tuaale ahaan.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Fur daboolka qarxisada. riix taboonka. Holac ayay sii daynaysaa. Dabka ayaa ka damaaya markaad sii dayso batoonka daarista. Xaqiiji inaad meel amaan ah dhigto qarxisada markaad isticmaasho kadib. Haddii aadan daboolka ku xirin qarxisada, dareeraha ku jira qarxisada aya daadan kara, tusaale ahaan ku daadan kara boorsada dhabarka, kadibna keeni kara khatar dab kicin ah.
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabataa €2.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaannada alaabta guriga, suuqyada.
Arin muhiim ah inaad ogaato Qarxisooyinku waxay adeegsadaa dareerayaasha propane ama butane. Mar walba xasuusnoow badbaadada dabka! Qarxisooyinka ugu raqiisan waa kuwa caaga ah ee qashinka lagu dari karo, halka kuwa ugu qaalisana ay muddo dheer ku hayn karaan aadna dareere kusoo shuban karto. Sidoo kale xasuusnoow inaad sidoo kale hubiso badbaadada dabka markaad dareere ka buuxsanayso.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Xijaabka dabka waxaa loogu tala galay in lagu difaaco sanbabooyinka qofka, lagana difaaco inuu qiiqa laqo, iyo indhaha marka aad ka baxayso guri ama qol qiiq ka buuxsamay. Waxay ka difaacdaa sanbabooyinkaaga gaasaska dabka, uurada iyo faniinada.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Markuu dab ka kaco guriga. Markaad ka baxayso ama caawinayso qof kale inuu ka baxo guriga. Difaaca dabka qiiqa ayaa la adeegsan karaa marka dab ka kaco deegaanka haddii aad u baahan tahay inaad naftaada difaacdo intaad sugayso badbaadiyaasha qiiquna soo galo qolka.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Kasoo saar difaaca qiiqa/dabka baakadeeda, fur kadibna gali madaxaaga. Naqshadaha iyo tilmaamaha yaa kala duwan ayadoo ku xiran shirkada soo saaraysa, akhri buuga tilmaamaha ku aadan sida aad u adeegsanayso difaacanaaga ama baro sida aad u adeegsanayso markaad ku jirto xiisadaha tababarka. Difaaca dabku wuxuu leeyahay qayb gaashaan ah iyo qayb hawada sifaysa. Difaacyada qaar ayaa leh qalab ifaaya oo ku xiran salka difaaca, halka difaacyada kale ay iskood u yihiin kuwo ifaaya. Ku xarayso jaakada difaaca qiiqa/dabka boorsada difaaca oo adeegso markaad u baahato.
Waa intee qiimahiisu? Waxay ka bilaabataa € 200, ayadoo ku xiran cidda kaa iibinaysa.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada difaacyada dabka, shirkadaha qalabka keena, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Gali qalabka qiiqa/Xijaabka dabka meel aad arki karto oo si fudud aad ugasoo qaadan karto. Xijaabka dabku kama hortagi karo holaca dabka. Markaad isticmaalayso, taxadar dheeraad ah waa in la siiyaa inaad ka baxdo ama aad naftaada ku difaacdo meel ku haboon oo guriga dhexdiisa ah. Marka dab uu kaco, adeegso kaliya nooca xijaabada dabka ka hortaga ee loogu talagalay dababka guryaha oo sidoo kale ka hortaga sunta kaarboonka. Xijaabku wuxuu ahaanayaa mid aad adeegsan karto asagoo ku jiray baakad aan la furin muddo dhan 8 sano. Haddii aad badasho miiraha qiiqa ee xijaab aadan adeegsan, xijaabku wuxuu shaqayn karaa 8 sano oo kale. Xijaabyada la adeegsaday waxaa qasab ah in la badalo. Haddii aad ka caawinayso qof kale ka bixista guri gubanaaya, marka koobaad difaaca neeftaada, kadibna difaaca neefsiga qof kale adinkoo adeegsanaaya xijaabka qiiqa/dabka. © Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Ganbaleelka qiiqu waa qalab sharci ah oo la dhigo meelaha dadku ku nool yihiin ama seexdaan. Ganbaleelka qiiqu wuxuu shegaa qiiqa. Wuxuu uga digaa qofka guriga dagan suuragalnimada in dab guriga qabsado wuxuuna kusiinayaa waqti aad ku damiso ama aad uga baxdo guriga. Sharciga Gurmadka ayaa waajib uga dhigaaya dadka guryaha dagan inay soo gataan, rakibtaan ayna maareeyaan ganbaleelada qiiqa. Waxaa qasab ah inay jiraan ugu yaraan hal ganbaleelka qiiqa ah oo ku xiran 60m2 kasta ee dhismaha dabaca la dagan yahay. Haddii gurigu ka wayn yahay 60 m2 balac ahaan, ugu yaraan waa in lagu xiraa labo ganbaleelada qiiqa ah.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Ganbaleelka qiiqa ayaa lagu rakibi karaa safiitada albaabka, hoolka, qolka jiifka, qolka fadhiga ama goob lamid ah.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Ganbaleelka qiiqa waxaa lagu dahjiyaa safiitada. Raac tilmaamaha rakibaada. Haddii ganbaleelku yeersho dhawaaq, hubi haddii uu jiro dab ka kacay dhismaha. Dami dabka haddii damin degdeg ah suuragal tahay. Haddii kale, iskaga bax dhismaha, udig dadka kale oo wac adeegyada xaaladaha degdega ah. Haddii ganbaleelku si bilaa macno ah u qayliyo, ka saar beytariga ganbaleelka qiiqa kadibna haawi dhismaha. Bedel beytariga. Haddii ganbaleelka qiiqu yeeriyo cod been ah ayadoon wax sabab ah jirin (tusaale, uusan jirin qiiq ka dhashay cunto karinta), waxaa qasab ah in la bedelo. Tijaabi ganbaleelka halmar bishiiba adoo riixaaya batoonka tijaabinta. Ganbaleelka qiiqu waa inuu cod sameeyaa marka la riixo batoonka. Haddii aan ganbaleelku shaqayn, hubi ama bedel beytariga ama soo gado mid cusub.
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabataa € 5-10.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? dukaanada alaabta guriga, dukaanada qalabka dhismaha, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Markaad iibsanayso ganbaleelka qiiqa, xaqiiji inuu leeyahay calamadaha CE iyo SFS-EN. Mudada uu shaqayn karo ganbaleelka qiiqu waa 5-10 sano. Ganbaleelka qiiqu wuxuu kusiinayaa digniin asagoo bixinaaya dhawaaq kooban marka beytarigu daciifo. Xaqiiji in beytarigu shaqaynaayo oo bedel beytariga halmar sanadkiiba, oo ay fiican tahay inaad isku waqti bedesho sanad kasta. (Ganbaleelka qiiqa ayaa sidoo kale lahaan kara beytari shaqeeya muddo 10-sano ah; marka beytarigu dhaco waa inaad bedeshaa ganbaleelka oo dhan.) Ganbaleelka qiiqa ayaa sidoo kale lagu xariirin karaa dabka korontada wayn, taasoo markaas shirkada guriga leh ay masuul ka tahay maaraynta qaybta.
Xirista iyo Bixintaan badbaado leh
Xirista iyo Xirista iyo Bixintaan badbaado leh
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Dhaqdhaqaqa waa inaan la xanibin. Inkastoo qufuladu ay difaacaan dadka iyo hantida, waa ianysan kaa hor istaagin inaad ka baxdo guriga. Meelaha laga baxo iyo albaabada loo maro meelaha laga baxo waa in si fudud loogasoo bixi karo gudaha guriga marka xaalad degdeg ah timaado. Dhaqdhaqaaq aan xanibaad lahayn ee gudaha guriga iyo inaad si badbaado leh uga baxdo guriga ayaa qayb ka ah badqabka dabka. Iskudarka baahida qufulka iyo bixitaan badbaado leh ayaa qayb muhiim ah ka ah amaanka guriga. Qufulada daaqada iyo balkoonka ayaa ka hortaga in daaqada laga dhaco.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Qufulada ayaa lagu xiraa albaabada iyo daaqadaha. Awooda aad u leedahay inaad kasoo baxdo gudaha waa in la hubiyaa labadaba albaabka wayn iyo albaabka laga baxo marka masiibo dhacdo.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Marinada looga baxo guriga waa inaan waxba oolin aana la xanibin ama lagu xirin qufulo ama alaabo aan muhiim ahayn. Dhammaan qufulada albaabka waa inay noqdaan kuwo dadku ka bixi karaan si degdeg ah markay muhiim tahay. Qufulada albaabku waa inay noqdaan kuwo la furi karo (markaad gudaha ku jirto) ayadoon qofku haysan fure. Furaha waxaa kaliya loo adeegsadaa in guriga lagasoo galo banaanka. Haddii daaqad loo adeegsado inay noqoto albaab laga baxo markay xaalad degdeg ah jirto, waxaa sidoo kale qasab ah la furi karo, tusaale ahaan, lagu furi karo qataarka daaqada. Sakatuurooyin ayaa loo adeegsan karaa albaabada qolka kaydka.
Waa intee qiimaheedu? Qiimuhu wuxuu ku xiran yahay nooca qufulka + qarashka kaaga baxaaya rakibidiisa.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada qufulada. Dhismayaasha leh guryaha falaadka ah iyo kuwa kala xiran, shirkada guriga ama maareeyaha dhismaha ayaa markasta masuul ka ah badalida qataarada guryaha.
Arin muhiim ah inaad ogaato Shirkad kasta oo guyaha maamusha, si lamid ah qoyska, waa inaad qiimaysaa badbqabkaaga ka bixista guriga aadna barataa sida loo looga baxo guriga marka dab kaco. Adeegyada Degdega ah waxay qiimeeyeen inuu jiro kaliya waqti dhan 2-3 daqiiqo oo lagu baxsho in si amaan ah looga baxo guriga marka dabku kaco. Haddii ay qaadanayso wax kabadan intaas si aad uga baxdo dhismaha, badqabka ka bixista dhismaha wa ain kor loo qaadaa. Xaqiijinta inaad si amaan ah uga baxdo guriga ayaa ah walaac guud oo haysta shirkada guriga. Xaqiiji in qof kasta oo kamid ah qoyska, oo carruurtu ku jiraan, ay furi karaan qataarada guriga marka xaalad degdeg ah timaado. Meel amaan ah dhigo qufulada. Tusaale ahaan, luminta furaha qayb guryo ah ayaa keeni kara inaad dib koodh ugu samayso albaabo badan qarashaadka ayaa laga qaadi karaa mulkiilaha guriga ee xooray furaha.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Bustayaasha dabku waxay ku daboon yihiin talaabada koobaad ee daminta dababka yaryar ee la xariira dharka, alaabta guriga, YV yada ama kookarada. Bustayaasha dabka ayaa sidoo kale ku haboon daminya dabka ka dhasha korontada iyo dababka dufanka. Bustaha dabku waa buste laga sameeyay alaab aan guban oo ka difaacda oxygen ta inuu gaaro waxyaabaha gubanaaya sidaas awgeedna waxay yareeyaan dabka.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Waa wax fiican inaad haysato bustaha dabka meel kasta oo uu xataa jiri karo khatar yar oo dab ah. Dababka caadiga waxaa keena kookarada, ciladaha korontada, qiiqa, shumacyada iyo dababka holaca furan. Waa wax fiican inaad bustaha dabka dhigato guriga, buulka, doonta iyo gaariga safarka ah.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Bustaha dabka waxaa lagu dhajiyaa darbiga meel laga baqaayo inay dab kiciso. Baro sida loo adeegsado bustaha dabka. Baro dab ku daminta bustaha kadibna baro sida aad u adeegsanayso marka xaalad degdeg ah jirto. Qabo geesaha bustaha kana soo jiid bustaha boorsada. Qabo ganaha ama geesaha bustaha kadibna bustaha kuduub gacantaada si aad u difaacdo. Gacmahaaga horay u fidi. Si tartiib ah bustaha ugu fidi waxa gubanaaya kadibna ku xir shayga s aan dabku mar kale u helin aariyada oxygen ta uuna u damo. Daa bustaha meeshaas ha saarnaadee. Marka dabku kakaco kuukarka, dami qalabka/gaaska. Daar difaaca kuukarka. U sheeg dabka kacay waaxda xaaladaha degdega ah adoo acaaya 112. Haddii dabku ka kaco banaanka, kaga imoow dabka dhanka dabayshu ka imaanayso, adoo naftaada ku difaacaaya bustaha. haddii ay muhiim tahay, lugtaada ku qabo bustaha aadna ugu damiso dabka.
Waa intee qiimaheedu? Waxay ka bilaabataa â&#x201A;Ź10.
Arin muhiim ah inaad ogaato Markaad iibsanayso bustaha dabka, xaqiiji in cabirkiisu yahay 120 cm x 180 cm uuna leeyahay calaamadaha CE iyo SFS-EN. ÂŠ Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Digsiga mikrowave-ka ah
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Digsiga mikrowave-ka ah wuxuu ku fiican yahay kululaynta iyo karinta cuntada. Wuu ka dhakhso badan yahay kookarka caadiga ah, wuuna ka qarash yaryahay waana ka amaan badan yahay dhanka isticmaalka.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Digsiga mikrowave-ka ah waxaa lagu isticmaali kara aguriga, xiliga safarka ama markaad joogto buuska, tusaale ahaan.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Gali cuntada qasac aan shoocaaca microwave-ku waxba u dhimayn kadibna gali microwave ka. Saar daboolka loogu talagalay microwave ka dusha digsiga. Dooro dabka aad ku kululaynayso iyo waqtiga kadibna daar microwave ka. Mikroweefku wuu isdaminayaa marka waqtiga aad dooratay dhamaado ama marka albaabka mikrowave-ka la furo. Kasoo saar cuntada mashiinka. Taxadar lahoow, weelka iyo cuntada ayaa noqon kara kuwo kulul. Nadiifi mashiinka mikrowave-ka.
Waa intee qiimahiisu? Laga bilaabo € 40.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada alaabta guriga, dukaanada oonleenka ah, suuqyada.
Arin muhiim ah inaad ogaato Waa inuu jira boos banaan oo ku filan si aalada mikrowave-ku hawo uga hesho. Ha saarin wax alaab ah dusha aalada. Aaladaha mikrowave-ka ah waa kuwo amaan ah marka sidii loogu tala galay loo adeegsado. Kaliya xaashiyaha iyo daboolada amaanka ku ah mikrowave-ka ayaa la adeegsan karaa. Markasta fiiri baakada ama qoralaka ku dhaqan aalada si aad u go'aamiso inay ku haboon tahay aalada mikrowave-ka. Ogoow in baakadaha ama cuntada loogu tala galay in lagu kululeeyo mashiinta mikrowave-ka ay kaliya dab qabsan karaa haddii la kululeeyo muddo aad u dheer ama dabka lagu xiro aad u sareeyo. Sidee awgeed, ka yaabi cunto karinta. Bar carruurtaada sida loo adeegsado aalada mikrowave-ka si amaan ah.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Ganbaleelka shoolada (kuukarka) wuxuu kor u qaadaa adeegsiga shoolada iyo badqabka cunto galinta. Wuxuu sameeyaa dhawaaq digniin ah haddii sagxada shayga dabka saaran/kululeeyhu dab badan qaato, haddii digsi/shay maran looga tago dabka ama digsi amma bir daawo dabka saaran uu aad u gubto.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Ganbaleelka waxaa la adeegsadaa marka shoolada wax lagu karsanaayo. Waxaa lagu rakibi karaa midkood dhanka gudaha ee daaha jikada ama darbiga ka sareeya meesha shooladu taalo asagoo lagu xiraayo jooga daaha.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Ganbaleelka shoolada waxaa darbiga lagu dhaiyaa dalooliyaha darbiga, cajalka koolada ee labada dhinac ah ama magnat lagula dhajiyo daaha ama duleeliye ama koolo labo dhinac ah oo darbiga lagula qabto. Raac tilmaamaha rakibaada. Aaladu waxay ku shaqaysaa beytariga umana baahna rakibaad koronto. U adeegso shoolada sidii cadiga ahayd. Haddii ganbaleelku qayliyo, dami shoolada, ka hortag dab inuu kaco kadibna dami ganbaleelka.
Waa intee qiimahiisu? Waxay ka bilaabataa €30.
Xagee ayaan ka iibsan karaa? Dukaanada alaabaha guriga, dukaanada alaabta korontada, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Waxtarka ganbaleelka shoolada waxa alagu saleeyaa codka ganbaleelka iyo qofka guriga dagan ee maqlaaya oo ka falcelinaaya. Ganbaleelka shooladu kama hortagaayo dab haddii uusan jirin qof ka falceliya dhawaaqiisa digniinta ah. Ganbaleelka shoolada waxaa lagu xiri karaa guri kasta, gaar ahaana qoysaska ay u joogaan carruurta iyo shaqsiyaadka ee ku jira xiliyada hore ee xanuunka dhimirka.
Dabaynta aaladaha ku shaqeeya beytariga
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Ma jiraan aaladaha korontada ku sahqeeya oo shaqayn kara haddaan la dabayn. Waxaa lagu dabayn karaa jaajar gaar ah.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Waxaad ku xiraysaa hguriga, xafiiska, tareenka, iwm. Meel kasta ood ka helayso dabka korontada.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Marka koobaad, hubi in jaajarka iyo fiiladu ay bad qabaan. Kadibna gali jaajarka bareeska dabka. Ku xariiri fiilada aalada aad doonayso inaad dabayso. Haddii ay muhiim tahay, ka saar daboolka difaaca ah aalada aad jaaj garaynayso, sida taleefanka, si aad uga dheeraato inay dab dheeraad ah qaadato. Marka beytarigu si buuxda u jaajar garaysmo, ka saar jaajarka aalada iyo bareeska.
Arin muhiim ah inaad ogaato Marna ha uga tagin aalada inay dabka ku seexto habaynkii oo dhan ama ayadoon cidna la joogin. Waxaa suuragal ah in aaladu dhab xad dhaaf ah qaadato inta jaajarku ku socdo. Ha jaaj garayn taleefankaaga ama kumbuyuutarka adoo sariirta la saaran ama meel udhaw wax dab qabsan karo. Haddii aaladu dab badan qaadato ama ciladoowdo, waxaa qabsan kara dabka. Adeegso jaajarka rasmiga ah ee aalada. Taleefanka iyo aaladaha kale ee badan ee korontada ku shaqeeya ayaa lagu jaaj garayn karaa jaajada USB ga leh, jaajarka bilaa fiilada ah ama aalada dabka kaydisa (jaajar aad qaadan karto). Applicationnada iyo alaabaha ku jira aalada ayaa dhuuqi kara beytariga. Waxaa fiican inaad damiso si aad uga hortagto in beytarigu si degdeg ah u dhamaado. Haddii aaladaada ama beytarigu waxyeeloobo, iska tuur oo mid cusub gado.
Batoonka daminta/ daarista ee kore
Batoonka daminta/daarista ee kore
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Batoonka daminta/daarista ee kore waxaa loo adeegsan karaa in laga damiyo kuukarka marka aan la isticmaalayn iyo in looga difaaco in si kama' ah qof u shido. Halkii aad ka adeegsan lahayd batoonka daminta/daarista ee kore, waxaad ka siibi kartaa fiilooyinka gdadka fiilada ama waxaad damin kartaa isku xiraha dabka (batoonka daminta ee hoose). Adeegsiga batoonka daminta/daarista ee kore waana ka amaan badan yahay saarista fiilooyinka.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Aalada kuukarada ah.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Daar batoonka daminta/daarista ee kore kadibna isticmaal kuukarka (fiiri kaarka KUUKARADA) adoo raacaaya qaabka caadiga ah. Markaad dhamayso karinta cuntada ama kululaynteeda, xaqiiji inaad damiso batoonka daminta/daarista ee kore mar kale. Batoonka daminta/daarista waxaa lagu dhajin karaa meel ku haboon, tusaale ahaan dhammaadka ama gudaha qaanada.
Waa intee qiimahiisu? Qarashaadka aalada + rakibaadeeda.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Waydii dukaanka alaabta guriga ama dukaanka alaabta korontada ee deegaankaaga aalada.
Arin muhiim ah inaad ogaato Batoonka daminta/daarista ee kore si fiican ayuu ugu haboon yahay, tusaale ahaan, qoysaska haysta carruurta iyo dadka dhimirka ka jiran. Batoonka daminta/daarista ee kore wuxuu sidoo kale kor u qaadaa amaanka kuukarka qoysaska haysta xaywaanka rabaayada ah sida eeyada ama biisadaha. Wuxuu badal u yahay qalabka dheeriga ah ee waqtiga cabira.
Qalabka waqtiga ee shoolada
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Qalabka waqtiga ee shoolada waxaa loo adegsadaa kor u qadista badqabka kuukarka. Kuukar ayaa kaliya shaqeeya marka waqtiga shaqada lagu xiro ayadoo la adeegsanaayo qalabka waqtiga cabira. Wuxuu sidoo kale damiyaa kuukarka waqti gaar ah oo loo sameeyay. Qalabka waqtiga cabiraa wuxuu ka difaacaa kuukarka in la daaro si kama' ah.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Markaad adeegsanayso kuukar lagu xiray cabiraha waqtiga, dooro waqtiga uu kuukarku shidnaanaayo (daqiiqadaha) adoo ka dooranaaya shaashada cabiraha waqtiga. Kuukar ayaa si caadi ah loo isticmaali karaa. Kuukarku ma daarmaayo haddii aan wax waqti ah lagu xirin qalabka waqtiga cabira. Dabka ayaa damaaya marka waqtiga shaqada ee lagu xiro uu dhammaado, kasoo intaas kadib kuukarku qaboobaayo. haddii aan cuntadu wali bislaan, ku xir aqti dheeri ah cabiraha waqtiga. Kuukarka ayaa lahaan kara qalabka cabirka waqtiga oo lagu keenay ('shoolada amaanka') ama waxaa lagu rakibi karaa waqti cabire gaar ah. Qalabka waqtiga sheega ee gaarka ah wuxuu u baahan yahay rakibaad uu sameeyo koronto yaqaan aqoonsi haysta laakiin waxa alagu xariirin karaa aalad kasta oo koronto ku shaqaysa. Qalabka waqtiga cabira waxaa lagu dhajin kara ameel ku haboon, tusaale ahaan mel aan loo jeedin oo gudaha ama dhammaadka qaandaha jikada ah.
Waa intee qiimaheedu? Qarashka qalabka + qarashka rakibaada
Xagee ayaan ka iibsan karaa? Waydii dukaanka alaabta korontada ee deegaankaaga aalada.
Arin muhiim ah inaad ogaato Ha saarin waxbo dusha ama aaga u dhawdhaw kuukarka. Qalabka waqtiga cabira ee lagu keeno kuukarka ama kuwa gaarka ah kama difaacayaan kuukarka inuu dab dhaliyo haddii aan kuntada karsamaysa lala socon. Haddii sagxada kuukarku kulushahay shay dabka kicin karana u dhaw yahay, dab ayaa kici kara. Batoonka daminta/daarista ee kore ama badbaadada shoolada ayaa ku haboon, tusaale ahaan, qoysaska haysta carruurta iyo dadka dhimirka ka jiran. Wuxuu sidoo kale kor u qaadaa amaanka kuukarka qoysaska haysta xaywaanka rabaayada ah sida eeyada ama biisadaha. Wuxuu badal u yahay batoonka dabka laga damiyo ee gaarka ah. © Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Difaaca shoolada / kuukarka
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Difaaca shoolada / kuukarka wuxuu si ootomaatig ah u sheEgaa khtaraha, wuxuu yeershaa ganbaleel wuxuuna, haddii loo baahdo, damiyaa kuukarka kahor intaan dab ka dhalan kuukarka. Difaaca kuukarku wuxuu si wayn kor ugu qaadaa badqabka kuukarka, laakiin ma aqoonsado dhammaan khataraha ka dhasha kuukarka.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Markaad adeegsanayso kuukarka.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Difaaca shoolada / kuukarka waxaa lagu rakibi karaa kukar kasta oo koronto ku shaqeeya Difaacu wuxuu ka kooban yahay dareeme lagu dhajiyay daaha ama darbiga oo lagu dhajiyay joog ku filan daaha iyo cabir xakameeya ah oo lagu xariirshay dabka korontada iyo kuukarka (bokiska madoow ee ka muuqda sawirka). Kadib marka la rakibo kuukarka waxaa loo adeegsan karaa qaabka caadiga ah. Xasaasiyada difaaca kuukarka ayaa wax laga badali karaa. Haddii kuukarku noqdo mid aad u kulul, difaaca ayaa ganbaleel yeerin kara. Ganbaleelka ayaa la joojin karaa cunto karintana sidii caadiga ah ayaa caadi loo sii wadi kara. Haddii aadan ka falcelin ganbaleelka, difaaca kuukarka ayaa damin doona dabka kadibna sagxada kulul ee kuukarka ayaa qabooba. Haddii difaaca shooladu damiyo dabka, kuukarka ayaa la damin karaa ayadoo la riixaayo batoonka ka muuqda dareemaha. Caadiyan, markaad cuntada karinayso, ma ogaan kartid difaaca kuukarka marnaba.
Waa intee qiimahiisu? Laga bilaabo € 300+ qarashaadka.
Xagee ayaan kasoo iibsan karaa? Dukaanada alaabaha korontada iyo farsamo yaqaanada korontada.
Arin muhiim ah inaad ogaato Wadanka Finland, kuukarada waxaa lagu xariiriyaa ilaha korontada iyo difaacyada shoolada waa inay rakibaan farsamo yaqaanada korontada. Difaaca kuukarku waa inuu raacaan Heerka Udagsan Difaaca Shoolada ee Yurub EN 50615. Difaaca kuukarka waxaa isticmaali kara qof kasta, gaar ahaana qoysaska haysta carruurta, dadka dhimirka ka jiran iyo qoysaska haysta xayawaanada rabaayada ah. Xataa haddii difaaca shooladu ku xiran yahay kuukarka, cuntada karsamaysa waa in lala socdaa. Si taas lamid ah, kuukarka iyo aaga ku xeeran kuukarka waa in laga dheereeyaa alaabaha guban kara. © Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Cabiraha waqtiga H I
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Cabirayaasha waqtigu waxay kor u qaadaan badbaadada korontada iyo dabka ayagoo xaqiijiya in aaladaha korontada ku shaqeeya aan laga tagin ayagoo shidan. Cabirayaasha waqtiga korontada ee la borogaraamin karo ayaa sidoo kale kordhiya badbaadada guriga marka qofka guriga dagan uu ka maqan yahay guriga muddo dheer (tusaale, uu aado safar ama marka isbitala la dhigo). Layrarka cabirka waqtiga lagu xiro ayaa loo adeegsan karaa si loo maareeyo xasuusta qofka qaba xanuunka xiska (xasuusta), tusaale ahaan. Cabirayaasha waqtigu waxay sidoo kale yareeyaan isticmaalka korontada.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Qalabka cabira waqtiga ayaa loo adeegsan karaa ku dhawaad aalad kasta oo koronto ku shaqaysa taasoo aan u baahnayn inay daarnaato waqti kasta.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Cabiraha waqtiga ayaa loo adeegsan karaa in waqti lagu xiro mudada uu shaygu daarnaanayo iyo cadadka waqtiga dabku shidnaanaayo. Intaas kadib dabka ayaa dami kara. Gali cabiraha waqtiga bareska korontada. kU xariiri aalada cabiraha waqtiga.
Waa intee qiimahiisu? Laga bilaabo €10.
Xagee ayaan ka iibsan karaa? Dukaanada alaabta guriga, dukaanada oonleenka ah, dukaanada alaabta dhismaha.
Arin muhiim ah inaad ogaato Ka or intaadan aalada ku xariirin cabiraha waqtiga, xaqiiji in aalada korontada ku shaqaysa shaqaynayso. Isla markaas hubi inaysan jirin waxyaabo guban kara oo u dhaw aalada korontada ku shaqaysa. Aalada korontada ku sahqayda ayaa lahaan karta cabiraha waqtiga oo lagusoo farsameeyay.
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Kuukar (ayna ku jiraan mid wayn iyo kuwa wax kululeeya) waxaa loo adeegsada ain lagu kariyo ama lagu kululeeyo cunto.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Kuukarada waxaa lagu isticmaalaa jikooyinka ama qolada cuntada lagu kariyo.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Diyaarso dhammaan maacuunta iyo maadooyinka aad ugu baahan tahay diyaarinta cuntada. Ha daarin kuukarka ilaa aad ka dhamaynayso diyaar garoowga. Biloow cunto karinta. Xaqiiji inaad kormeerto cuntada dabka saaran aadna damiso aalada ama ofenka kadib markaad cuntada kariso.
Waa intee qiimahiisu? Laga bilaabo € 150 + qarashaadka rakibaada. Rakibaada caadiga ah waa rakibaada cayiman ee uu sameeyo farsamo yaqaanka korontada aqoonsi ku haysta. Cabirayaasha kaligood istaaga ayaa sidoo kale ah kuwo raqiis ah. Waxaa laguu ogolyahay inaad kuukarka kaligiis istaaga ku xariiriso bareeska adigga qudhaadu.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada alaabaha guriga, dukaanada alaabta korontada, dukaanada oonleenka ah.
Arin muhiim ah inaad ogaato Waxaad adeegsan kartaa digsiga noocaad doonto ah, bird daawada ama birdaawada maraqa ee dabka iska difaacda markaad wax ku karsansyo jikooyinka ama kuwa dhoobada ka samaysan. BiR Dawooyinka birta ah, (dabka ka hortaga) galaaska ah ama kuwa dhoobada ah ayaa la galin karan oofenka. Waxaad kaliya adeegsan kartaa xaashiyaha wax lagu kariyo ee birta magneetka leh ka samaysan markaad galinayso kuukarada waayo kuukarku ma gubi doono alaabo kasta oo kale. Cuntada ayaa si degdeg ah u kululaata marka lagasho kuukarka. Mar kasta xaqiji inaad daarto batoonka geeska saxda ah. XASUUSO BADBAADADA DABKA. WAA INAADAN WAXBA SAARIN DUSHA AMA AGTA KUUKARKA. Sagxada kuukarka ee looga tago ayadoo shidan ama saliida cunto karinta ee aadka loo kululeeyay ayaa dab kicin kara. Kuukarka iyo sagxadihiisa wax lagu karsado waxa akaliya loogu tala galay kalinta iyo kululaynta cuntada, looguma tala galin in guriga lagu kululeeyo. © Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Fiilada lagu dheereeyo batoonka daarista/daminta
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Haddii aysan jirin baraha dabka laga daaro oo ku filan guriga ama haddii fiilada aalada korontada ah aysan lahayn dheerarkii laga rabay, waxaad u baahan kartaa fiilada lagu dheereeyo. Fiilada lagu dheereeyo batoonka waxaa loo adeegsadaa in bareeska loosoo dhaweeyo aalada.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Fiilada lagu dheereeyo batoonka waxaa qasab ah in loo adeegsado aaga ama qolka ama meesha la rabo in la gaarsiiyo. Markaad banaanka u adeegsanayso, adeegso fiilada dheeraynta oo leh difaaca magnatka, oo aan biyuhu gaarayn. Waxaad galisaa bareeska korontada ee banaanka.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Markasta xaqiji in fiilada lagu dheereeyo bareeska ay tahay mid aan cilad lahayn ka hor intaadan isticmaalin. Iska tuur fiilada lagu dheereeyo bareeska ee dilaacsan. Gali fiilada lagu dheeraynta bareeska. Fiilada lagu dheereeyo bareeska waxaa qasab ah in kaliya la gasho barta dabka ee ku haboon in la gasho. Ogoow inay jiraan bareesyo leh magneet iyo kuwo aan lahayn. Ku xir aalada korontada ah ee korontada ku shaqaysa godka fiilada lagu dheereeyo bareeska. Ha isku xariirin fiilooyinka lagu dheereeyo bareeska oo badan ood isku daba taxdo. Taas badalkeed, adeegso fiilada dheeraynta oo dheer in kugu filan.
Waa intee qiimahiisu? Waxay ka bilaabataa € 5.
Xagee ayaan kasoo iibsanayaa? Dukaanada alaabta guriga, dukaanada oonleenka ah, dukaanada alaabta dhismaha.
Arin muhiim ah inaad ogaato Ku xariiri kaliya qalabka ku shaqeeya korontada xawliga hooseeya leh fiilada lagu dheereeyo lagu dheereeyo bareeska korontada. Qalabka korontada hosaysa adeegsada, sida qalabka wax kululeeya, ayaa keeni kara dab iyo kuleel xad dhaaf ah, kadibna qarxin kara fiilooyinka. Haddii qaybo kamid ah aalada korontada ah, fiilada lagu dheereeyo bareeska ay ku jirto, uu dab dheeri ah qaato, waxay muujinaysaa cilad ama xad dhaaf koronto kaasoo keeni kara dab ama shil. Gubashada dheeriga ah ee aalada korontada ku shaqaysa ama fiilada dabka ayaa sidoo kale lagu ogaan karaa ur qurmuun oo soo ura. Fiilada lagu dheereeyo bareeska ayaa sidoo kale ku timaada batoonada daarista-daminta. Markaad batoonka DAMISO wuxuu sidoo kale daminayaa batoonada ku jira iyo aaladaha ku xariirsan fiilada. Haddii fiilada lagu dheereeyo bareesku ku timaado duub ahaan, waa in fiilada la kala furaa kahor intaan la adeegsan, haddii kale dab dheeraad ah ayay qaadaysaa. Waa fikir fiican in lagu difaaco fiilooyinka dheeraynta iyo bareesyada qalabka difaaca marka bareeska la isticmaalaayo. Ha ku adeegsan fiilada lagu dheereeyo bareeska meelaha qoyan. © Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Dab dhaliyaasha hawada iyo marqaxadaha
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Qalabka wax kululeeya ee la qaadan karo, qalabka qaboowga ee korontada ah ama marwaxadaha korontada ku shaqeeya ayaa loo adeegsadaa in lagu kululeeyo si ku meel gaar ah guryaha ama qololka. Kululeeyaashu waxay baxshaan dab dheeraad ah haddii nidaamka kuleelka ee caadiga ah uusan kugu filnayn ama marka dhismayaashu aysan lahayn kululeeye. Si waafaqsan, marwaxadaha korontada ku sahqeeya ayaa loo adeegsada ain lagu qaboojiyo guriga, gaar ahaana marka lagu jiro xiliyada kuleelaha.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Waxaa loo adeegsadaa kululaynta ama qaboojinta gruiga ama qol kaliya.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Kululeeyaasha iyo marwaxaduhu waa aalado ku shaqeeya koronto kuwaasoo la gasho bareeska korontada. Mar kasta aaga kululeeyahay nadiifi. Ha daboolin kululeeyahay ama marwaxada. Khatarta dabka.
Arin muhiim ah inaad ogaato Adeegsiga kululeeyaal badan ama marwaxado isku mar ama ku xiristooda isku fiilo ayaa keeni kara inuu dab badan qaado uuna qarxo fiilada. Waa fikir wanaagsan inaad galiso aaladaha bareesyo ku xiran fiilooyin kala duwan. Haddii aaladu si joogto ah u qarxiso fiilada, nadiifi oo kormeer ku samee ama iska tuur aalada. Kormeer ku samee badqabka korontada iyo dabka markad adeegsanayso kululeeyaasha iyo marwaxadaha hawada. Waligaa ha taaban aalad koronto ah haddii aad qoyan tahay. Khatarta shooga korontada. Ha aadin meelaha qoyan adoo caga cad ee ay yaalaan alaabaha korontad aku shaqeeya ee la qaadi karo sida kululeeyaasha ama marwaxadaha. Haku qalajir dharka fiilooyinka korontada ama haku daboolin kululeeyaasha ama marwaxadaha. Xasuusnoow inaad nadiifiso ood buufiso kululeeyaha iyo marwaxada markii loo baahdo.
(Godka qaybinta korontada)
Bokiska fiilada (Godka qaybinta korontada)
Waa maxay sababta aan u adeegsanaayo? Fiilooyinka ayaa si wadajir ah loo wada galiyaa godka dabka qaybiya, kaasoo noqon kara mid furan ama xiran (bokiska fiilada). Haddii ujeedooyinka fiilooyinku waa in laga kortago in ay dhacaan shilal iyo dab ka kaca, iyo sidoo kale waxyeelo dhanka alaabta ah taasoo ka imaanaysa cilad ku jirta fiilada iyo aaladaha shaqo gaba, ama si qaldan u adeegsiga qalabka korontada. Godka dabka qaybiya wuxuu leeyahay batoon wayn oo laga damiyo kaasoo damiya korontada dhammaan aaga.
Xagee ayaan u adeegsanayaa? Bokiska fiilada ayaa laga helaa guri kasta. Waxaa lagu dhajiyaa darbiga. Bokiska fiiladu waa in si fudud lagu gali karo. Waxba lama saari karo dushiisa.
Sidee ayaan u adeegsanayaa? Bokiska fiilada waxa aku jiri kara fiilooyinka dabka oo duq ah ama waxaa ku jiri kara fiilooyin casri ah (heerarka dhabta ah) halkii ay ku jiri lahaayeen fiilooyin. Waxaa kuwaan dheeri ku ah, bokiska fiiladu wuxuu leeyahay batoon wayn oo laga damiyo/daaro kaasoo daara dhammaan korontada guriga ama damiya hal mar. Haddii aan aalada korontadu shaqaynayn, hubi in fiilooyinku si fiican u rakiban yihiin ama u caafimaad qabaan. Ku badal fiilada qaraxda mid cusub. Haddii isku xiraha fiiladu jeexmo, cabirkiisa dabka ayaa damaaya. Soo daar korontada adoo leevarka kor u soo qaadaaya. Hadii fiilada bareeska (nooca soketku) jeexanto, riix batoonka madoow si aad usoo kiciso. Haddii fiiladu si joogto ah u qaraxdo, waxaa dhib ka jiraa rakibaadeeda ama aalada korontada. La xariir farsamo yaqaanka korontada si uu u baaro una xaliyo cilada.
Arin muhiim ah inaad ogaato Adeegsiga kululeeyaal oo kala duwan ama marwaxado isku mar ama ku xiristooda isku fiilo ayaa keeni kara inuu dab badan qaado uuna qarxo fiilada. Waa fikir wanaagsan inaad galiso aaladaha bareesyo ku xiran fiilooyin dhawr ah oo kala duwan. Fiilooyinka aa sida saxda ah loo xariirin ayaa aad u kululaan kara keenina kara dab. Kuukarka iyo shoolada sauna waxaa lagu maarayn kara 1-3 fiilo. Haddii aadan doonayn inaad adeegsato aalad koronto ah muddo dheer, ama haddii aad doonayso inaad yarayso isticmaalkeeda ama aad doonayso xaqiijinta badbaadada sababo kale awgood (tusaale ahaan, carruurta oo adeegsanaaya shoolada sauna ama qof dhimirka la oo adeegsanaaya kuukarka), dabi fiilooyinkeeda. Ku astee fiilooyinka la saaray ama la jaray qoraalka qeexan ee dhahaaya 'Waa la damiyay'. Haddii aad damiso isticmaalka aalada, xaqiiji inaad kasaarto dhammaan fiilooyinka maareeya shaqada aalada. © Ururka Gurmadka Qaranka ee Finland 2019
Safety Cards - Turvakortit - Somali